အီတလီအမ်ဳိးပထမတန်းဂုဏ်တက္ကသိုလ်မွတ္ထားမႈမ်ားကိုနှစ်ဦးနှင့်အတူသခင်။ ၊ကိုက်ညီ၊ကြွယ်ဝသောအခမဲ့ပညာေရးပစ္စည်း ရှာကြံယောက်ျားစေဖို့အတွက်ချစ်ကြည်။ အမြင့်ကနေ။ လက်တင်-ရုရှ။ ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်:ရုရှား။ အသက်အရွယ်။ အသက်ရှင်သောအတွက်ရုရှားနိုင်ငံ။ အဘို့အရှာဖွေနေထီးနေထိုင်မှုအတွက်ဆိုက်ပရပ်စ်မှလေးဆယ်လေးနှစ်အတွက်ချစ်ကြည်ရင်းနှင့်ပေါင်းသင်း။ ငါလေးဆယ်သုံးနှစ်။ ကျွန်တော်ကရုရှားထံမှ။ ရုရှားအမျိုးသမီးများ၊လေးဆယ်နှစ်အရွယ်၊ဘီရွည္၊ရွှေရောင်နှင့်ဆွဲဆောင်မှု။ သွက်ဗမာ၊ဖော်ရွေပြီးအတွက်စိတ်ဝင်စားပြောနေတာ။ ဦးကြိုပြုခြင်းဖို့အဆင်သင့်နှင့်အကျွမ်းရအဆင်းလှသောရုရှားအမျိုးသမီး၊ဆယ့်လေးနှစ်၊စီးပွားရေးပညာရေး၊ကွာရှင်း၊သားတဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ်လူပေါင်းကောင်းသော၊စိတ်ရင်းမှန်၊လျောက်ပတ်သော၊အလိုရကျွမ်းနှင့်အတူအနှစ်လေးဆယ်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ကောင်းစွာပညာတတ်ရုရှားအမျိုးသမီး(နှစ်)နှင့်အတူအကောင်းပုံသဏ္ဍာန်၊အများကြီးအငယ်၊အမည်ရအကျွမ်းနှင့်အတူတစ်လျောက်ပတ်သောယောက်ျားသည်။ ဖုန္း။ ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ကောင်းစွာပညာတတ်ရုရှားအမျိုးသမီး၊သက်ကြီးရွယ်အို၊အများကြီးငယ်နှင့်အတူ၊ကောင်းတစ်ဦးပုံ၊တွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူတစ်လျောက်ပတ်သောယောက်ျားသည်။ အဂၤလိပ္၊ဂရိ၊စပိန်၊ပိုလန်။ ဖုန္း။ အမျိုးသမီးထံမှမော်လ်(စ္)အကျွမ်းနှင့်အတူလူအတွက်အနှစ် မိသားစု။ ဖုန္း၊မတ္စိုး။ မိန်းကလေး(နှစ်)၊တစ်သွယ်ဆံပင်ရွှေရောင်အမည်ရှိကျမ်းရ၊ကျွမ်းနှင့်အတူအနက်ရောင်ဆံရှင်နှစ်အဘို့အအနီးကပ်ဆက်ဆံရေး၊ဖြစ်ကောင်းပင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည်။ ဖုန္း။ အဘို့အရှာနေနောက်ထပ်နှစ်၊အီရန်လူမှုရေးနှင့်ပျော်စရာရှိသည်၊ဖြစ်ကောင်းပင်အတူတကွနေထိုင်အတွက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကူအညီနှင့်အထောက်အပံ့။ ဖုန္း၊။ ငါသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမိန်းမ၊ဒါပေမယ့်ငါဒီလူရဲ့အပူနှင့်လူရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောပခုံးအလွန်ကြီး။ ကိုယ့်လိုအပ်ပါတယ်။ ချိုရုရှားအမျိုးသမီးများကိုရရန်လိုလားကျွမ်းနှင့်အတူအလေးအနက်လူလေးဆယ်ငါးနှစ်အဘို့အတစ်မိသားစု။ ငါအသက်ရှင်သောအတွက်မော်စကို၊သုံးဆယ်ခုနစ်နှစ်အငှားများအတွက်ရေရှည်သို့မဟုတ်အတိုကောက်သက်တမ်းနှစ်ဝန်းဝန်းအိပ်ခန်းထဲမှာအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသောနှင့်အတူအသိုင်းအဝိုင်းရေကူးကန်၊နှစ်ရာကနေမီတာကမ်းခြေနှင့်ပန်းခြံစစ္ဖို
ဦးကြိုပြုခြင်းတည်းအာရှအမျိုးသမီးများအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ခုနစ်ဆယ့်-လခရီးစဉ်ကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ။ င္ငံတကာကချိန်းတွေ့နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း။ မျက်နှာချင်းမိတ်ဆက်။ တွေ့ဆုံလှပတဲ့အာရှအမျိုးသမီး။ ဖိလစ်ပိုင်သတို့သမီးကို-သင်အဘို့အရှာနေတစ်မိန်းကလေးအဘို့အချိန်းတွေ့။ သတို့သအွန်လိုင်းသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဦးဆောင်အွန်လိုင်း ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ နိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်အတွက်အခမဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ယနေ့။ အဆင်းလှအတူ၊ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်။ သူတို့ရဲ့ရှေ့တိုင်းအလှအပနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအောင်ကြီးများ၏နိုင်ငံခြားအမျိုးသားများအဘို့ရူး။ ဒါဟာအံ့သြစရာဘာကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောနိုင်ငံခြားအမျိုးသားများအတွက်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်လည်း နှင့်အတူအလှအပများ အမျိုးသမီးနှင့်အတွေးအချိန်းတွေ့ဖို့သူတို့ကို၊ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအချို့အလွန်အရေးကြီးသောအရာက မျိုးသမီးများအကြောင်းသင်သိရှိရမည်:အမျိုးသမီးများ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမမြှုပ်နှံသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်စောင့်ရှောက်မှုယူပြီး၏အသွင်အပြင်။ သူတို့လည်းယုံကြည်၏တန်ခိုး။ သူတို့အနေနဲ့အံ့သြဖွယ်အထုပ်များ၏အလှအပနှင့်ဦးနှောက်။ အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး အတွက်အများကြီးရှိသည်။ သူတို့စမတ်နှင့်ရည်မှန်းချက်။ ပင်အချို့အကွက်စဉ်းစားသောပုလ်တစ်အများစုအားဖြင့်လူကဲ့သို့ကွန်ပျူတာ၊အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဗိသုကာ၊ အမျိုးသမီးများမှာအောင်မြင်။ သူတို့အလွန်အမင်းခက်ခဲ-အလုပ်အဖွဲ့နှင့်လုံ့လဝိ။ သူတို့ပေးခက်ခဲတဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အမျိုးသားများ။ ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးကြီးကိုကိုင်တွယ်ခြင်းအတွက်ပိုက်ဆံကိစ်။ သူတို့မသိတဲ့အခါသုံးစွဲဖို့လာသောအခါကယ်။ မပေးလျှင်အဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးတရာနှစ်ကောင်၊သူမဝယ်နိုင်အများအပြားအမှုအရာတူ၊သငျသညျကိုသာဝယ်နိုင်လျှင်အဆိုပါငွေကြေး၏ပမာဏသည်နှစ်ဆ။ ဤအမျိုးသမီးများအခွက်တဆယ်ဝယ်ယူ၏အရည်အသွေးကောင်းထုတ်ကုန်မှာတတ်နိုင်သမျှအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်း။ သူတို့ကအများကြီးညှိနှိုင်းရေးကျွမ်းကျင်မှုသောသူတို့ကိုကူညီဖို့ပိုက်ဆံအများကြီးကိုကယ်တင်။ သူတို့ကအရမ်းရှည်သောအခါပြင်ကိုသူတို့ဝယ်ယူနေသောတစ်ခုခု။ သူတို့မကြာခဏနှိုင်းယှဉ်၏စျေးနှုန်း ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရာတွင်ရှေ့၌။ သူတို့လက်လွတ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ထဲကတစ်ဦးလျှော့စျေးသို့မဟုတ်အရာင္းရန္ရွိသည္။ ဒါကြောင့်၊သင် အမျိုးသမီးယူမထားပါနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအမှတ်မထင်။ သူတို့အလွန်သစ္စာနှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့။ ထို့ကြောင့်၊သူတို့ကဖြစ်လာသစ္စာရှိဇ။ တခါတလေ၊သူတို့သစ္စာသဘာဝလည်းသူတို့ကိုဆင်းရဲတွေအများကြီး။ အမျိုးသမီးဖြစ်လူသိများကြသည်ရက္ကဆက်ဆံရေးအတွက်။ ပင်လျှင်သူတို့မပျော်တစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်၊သူတို့နေဖို့မယ်လို့။ သူတို့ဆင်းရဲခံရလိမ့်မယ်တိတ်တဆိတ်ပေမယ့်မရွေးချယ်ကွာရှင်းများအတွက်။ သူတို့ကပ်ဖို့သူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူတို့အလွန်အမင်းသစ္စာ။ လျှင်ထိုပြဿနာကိုအရှိန်၊သူတို့အဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်အမျိုးဆေးတည်ငြိမ်စွာ။ ဤသဘာဝတရား၏ အမျိုးသမီးတို့စံပြမယား။ လျှင်သင်လက်ထပ်တစ်မျိုးသမီး၊သင်သေချာသင်ရှိသည်လိမ့်မယ်တစ်ဦးနွေးထွေးသောနှင့်မေတ္တာမိသားစုအတူ။။။။ ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းစမတ်နှင့်ရည်မှန်းချက်၊ အမျိုးသမီးအလွန်အမင်းမိသားစုဖြစ်သည်။ တခါသူမသည်လက်ထပ်၊သူမ၏ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးမည်ဖြစ်သူမ၏ခင်ပွန်း။ အ ယဉ်ကျေးမှု၊အမျိုးသမီးများကိုသွန်သင်စီမံခန့်ခွဲဖို့တစ်အိမ်စနစ်တကျကတည်းကတစ်ဦးအလွန်ငယ်ရွယ်တဲ့ အသက်အရွယ်။ ထို့ကြောင့်၊ မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီး၏အလွန်တာဝန်ရှိရောက်နေတယ်။ သူတို့ပြင်ဆင်မည်ကောင်းတဲ့အစားအစာအတွက်သူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းနှင့်သူတို့အိမ်သန့်ရှင်းရေး။ သူတို့ကသေချာအောင်သူတို့၏ခင်ပွန်းများသက်သာဘဝကိုအသကျ။ သူတို့ကအစပတ်လည်အသားနှင့်ဂရုစိုက်သူတို့ရဲ့လိုအပ်။ တစ်အမျိုးသမီးတိုင်ကြားမည်မဟုတ်ဆိုရင်၊သူမဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့သူမ၏အလုပ်အဘို့အလိုငှါသူမ၏မိသားစု။ ပျော်စရာ-မေတ္တာနှင့်ရွှင်လန်းသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ မယားစေသည်သူတို့ကိုကြည့်တောင်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုနှင့်။ မျိုးသမီးများအချစ်အကြောင်းပြောဆိုရန်တွေအများကြီးအမှုအရာ။ လျှင်သင်ရက်စွဲတစ်၊သင်အကယ်စင်စစ်ခံစားကြည့်ပါသူမ၏ကုမ္ပဏီအဖြစ်သူမသည်အလွန်ရွှင်လန်းသော။ အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးများမှာအလွန်နှစ်လိုဖွယ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှု။ သူတို့၏အလှဆုံးအမျိုးမျိုးသမီးများ၏သင်သည်အစဉ်အဆက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးရှိပါတယ်ကြီးမားသောအတိုင်းမျိုးဗီဇကွဲပြားမှုသောသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အင်ဒိုနီးရှားနှင့်မတူ၊အခြားနိုင်ငံများအတွက်အရှေ့တောင်အာရှ။ လူအအင်ဒိုနီးရှားဖြစ်ကြ၏တစ်ဦးရောနှောတရုတ္၊မေလး၊အာရဗစ္၊အိန္ဒိယ၊အစာနှင့်ဂျပန်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်လက်ထပ်ဖို့တစ်ခုအင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီး၊သင်သိသင့်သောအချို့သော အမှုအရာအကြောင်း။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အမျိုးသမီးအတွက်အမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရေပြားတန်ချိန်အတွက်။ သင်သည်လည်းရှာဖွေအမျိုးသမီးအမျိုးမျိုး၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်သဘာဝတွင်ရှားပါ။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်လူငယ်တို့၊အင်ဒိုနီးရှားမိန်းကလေးကိုရှာဖွေနေကြသူများအတွက်မေတ္တာနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း။ သင်သည်လည်းရှာဖွေသူအမျိုးသမီးနှင့်အတူစွဲလမ်းနေကြသည်အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများနှင့်၎င်းတို့၏။ ပေမယ့်ရန်ခက်ခဲသည်ငှာအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီး၊ဒီနေရာမှာအချို့၏အသုံးအများဆုံးလက္ခဏာအကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်အားလုံးနီးပါးတွင်အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီး။ အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးစိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်ကစားဏာဂိမ်းများနှင့်မတူ၊အနောက်တိုင်းအမျိုးသမီး။ ဒါကြောင့်၊သူတို့အဘို့အကြည့်စိုးနှင့်အစွမ်းထက်။ သူတို့ပြဿနာမရှိပါလျှင်ထိုလူကိုယူတာဝန်ခံတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်။ တကယ်တော့၊သူတို့ပျော်ရွှင်စေမယ်လို့နှင့်အတူယောက်ျားယူ။ သူတို့လိုချင်တဲ့မိမိတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ယူမှအရေးကြီးဆုံးဖြတ်ချက်များ၏မိသားစု။ သူတို့မဖြစ်ကြ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားဖြင့်တိုက်ပွဲ၊နှင့်မတူအနောက်တိုင်းအမျိုးသမီး။ သူတို့ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ကြိုးစားထိန်းချုပ်ဖို့ယောက်ျားတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်။ လျှင်သင်အပေါ်မှီခိုသူမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားနည်းနှင့်အတူတက်ကိုချိုးဖျက်။ အဆိုအရ အင်ဒိုနီးရှားယဉ်ကျေးမှု၊အမျိုးသမီးသင့်တင်အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုသာ။ ထို့ကြောင့်၊အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးများမှာအစဉ်အမြဲဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်။ သင်ရံဖန်ရံခါတွေ့အရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်အ ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီး။ အများကြီးရှိပါတယ်လွျသာ။ အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးမှတွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့အသွားအရေပြားများအတွက်ကုသမှုများ၊ဒီဇိုင်နာအဝတ်၊အတုလက်သည်းနှင့်မိတ်ကပ်။ သူတို့ကအရမ်းသော၊ရိုးသားသော၊နှင့်သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အချိန်အများကြီးအတွက်ကောင်းသောရှာဖွေနေသည်။ ထို့ကြောင့်၊သင်သည်နီးစပ်အာရုံစိုက်ကြည့်ပြီးသူမ၏ချီးမွမ်း။ သင်သည်လည်း၏အသွင်အပြင်နှင့်ချိန်းတွေ့ကြသောအခါတစ်ဦးကိုအင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီး။ ဘာသာကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍ၏အသက်တာ၌အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီး။ အများစုကအင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးများမှာ။ ပင်လျှင်မလွန်ဘာသာရေးနှင့်အစဉ်အလာ၊သူမဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ပြောင်းလဲမှုသူမ၏ဘာသာတရား။ အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးများမှာအလွန်ပျော်စရာမတ်ေတာ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာချစ်ပါတီ၊ခရီးသွားနှင့်အသည်းအသန်လိင်။ သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်မွေ့လျော်အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီး။ သူတို့အလွန်ကြီးစွာသောပေါင်းစပ်၏အစဉ်အလာနှင့်ခေတ်မီအမျိုးသမီး။ အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးအလွန်ပျော်ရွှင်လျက်ရှိကြသည်။ သူတို့မရှိသလောက်တိုင်ကြားသို့မဟုတ်ခါက္ဆြဲေ။…
အခါဧည့်သည်ဖိလစ်ပိုင်တွင်ပထမဦးဆုံးမြင်တစ်ဦးနှစ်အရွယ်ယောက်ျားနှင့်အတူနှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ် သူတို့တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေခြင်းငှါ။ နေစဉ်ဤအစွန်းရောက်ဥပမာ၊ဒါဟာအံ့သြစအဲဒီဧည့်သည်များအကြောင်းတွေ့ရှဒီ စုံတွဲလက်ထပ်ပြီးခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စစ်ဆေးနှင့်အတူဤအတူစုံတွဲတစ်တွဲခြောက်နှစ်ကနေအခုတော့၊သူတို့ဖွယ်ရှိအဖြစ်ကျင်းပသူတို့ရဲ့ဆယ်-ပါၿပီး။ လာပြီကြောင်းရန်အလွန်နီးကပ်၏ပျမ်းမျှအလျားတစ်အိမ်ထောင်လူအကြားတူညီသောအသက်အရွယ်နှင့်အသက်အရွယ်လျှို့ဝှက်နေဆဲဆိုတဲ့အတွက်အများအပြားလူ့အဖွဲ့အစည်း။ ကလုံးတင်တစ်အရေအတွက်အပေါ် ပျမ်းမျှအသက်အရွယ်ကွာဟချက်၊ဒါပေမယ့်ဒီစာရေးတဲ့မကြာသေးတီဖိလစ်ပိုင်အတွက်အဘယ်မှာရှိဧည့်သည်တွေဟာအဓိက ။ ပျမ်းမျှအသက်အရွယ်အသီးအသီး၏အထီးထောင်ဖက်ကလဲဗ်ာ။ ပျမ်းမျှအသက်အရွယ်၏အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဖက်ကနှစ်ဆယ်ငါးနှစ်။ အပြာရောင်၏ပျမ်းမျှအလျားထောင်(သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ပူးေ)ကငါးနှစ်။ ဒီကနေကျနော်တို့ခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းတစ်ခုမှာဧည့်သည်ပါတီခဲ့သူအမေရိကန်လူကိုသာသုံးဆယ်အသက်အနှစ်။ သူဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြောင်းအသက်ယောက်ျားဖြစ်ရပြီလိုကစား မှာအတန်းရဲ့အလယ်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်အတွက်။ ပာသူကတအံ့တသြကြည့်ဖို့ဤလူတို့၊နေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့်အတူအကြီးအငယ်မိန်းမ၊အသက်ကြီးများအတွက်အခကြေးငွေကောက်ခံ။ အများစုကနိုင်ငံခြားနေသောယောက်ျားဆောင်းဦးရာသီအတွက်၎င်းတို့၏အနှစ်ရှိဖခင်နှင့်အတူကလေးငယ်များ လှသူအနှေအသက်တာ၏။ အသား၏ဤဆက်ဆံရေးကိုအလွန်အမင်းတန်ဖိုးကိုဖိလစ်ပိုင်တွင်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ ဒါဟာကပြောသည်ခဲ့မူသည်အမြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ကြောင်းအဖေလင်း မီကလေးလူကြီးရောက်ရှိ။ နေစဉ်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်မည်အကြောင်းရှိပါတယ်၊တစ်ကြီးထွားလာသည်ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းတူညီတဲ့အသက်အရွယ်အိမ်ထောင်ကြာရှည်မည်မဟုတ်သည့်တိုင်အောင်အလေးရင့်ကျက်။ အချို့လူငယ်’အဘ’မပင်နေသည်အထိကလေးမွေးဖွားပြီးကလေးအထောက်အပံ့မဖြစ်ပေါ်မြင့်မားသူတို့ရဲ့ဦးစားပေး။ သားသမီးတည်းဖြစ်ကြ၏အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်လူငယ်အမျိုးသမီးကိုပိုနှစ်သက်အလွန်ရင့်ကျက်အမျိုးသားများ။ မအားလုံးရင့်ကျက်အမျိုးသားများကလေးများရှိသည်။ အသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်သည်အအ အစောပိုင်းအသက်တာ၌။ ပြဿနာများကိုဤကဲ့သို့သောကြပြီအားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင် ပြောင်းပြန်၊အတုသုက်၊အမွေးများ၊သို့မဟုတ်ရှာဖွေအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဘယ်သူသည်ပြီးသားရှိပါတယ်။။။။။ အချို့အသက်အရွယ်ကွာဟချိန်းတွေ့သည်တရားဝင်နည်းလမ်းရှာတွေ့ဖို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ပြုရန်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများကိုင်အယူခံ? သင်ပြင်ဆင်ထားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အဇၩိ? သင်ဟုတ်ပါတယ်ပြန်လျှောက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဦးစလုံးမှမေးခွန်းများကို၊ထိုအခါသင်ကကြိုးစားသင့် ။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုမကြာခဏပြသအသက်အရွယ်မဇၩိမ။ အဲသည်ရေပန်းစားနေသောသဘောထားအရွယ်မှာလူအနားယူအစောပိုင်းမှအငယ်ရှိသည်။ သက်လူမျိုးသင့်မှာအတန်း ဟိုကစား ။ သူတို့သေချာပေါက်မဖြစ်သင့်။ ထိုကြီးပွားသည်ကလေးများထံမှအကျော်-လူတစ်ဦးရဲ့ယခင်ဆက်ဆံရေးကိုမကြာခဏအထင်ဖေဖေရဲ့အလုပ်ဟာအခုဆွဲထားဖို့ပတ်ပတ်လည်နှင့်၎င်းတို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပိုက်ကွန်ကို၊ခံရှာဖွေနေပြီးနောက်မြေးမေးမြန်းသည့်အခါ။ ဒါတွေအားလုံးကျိုးနပ်ရေးရာဒါပေမယ့်သည့်အခါတစ်ဦးအပေါ်-လူတစ်ဦးနေဆဲကျန်းမာရေးနဲ့ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့သဘောထားရှိပါတယ်အဘယ်သူမျှမခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်မစတင်ဖန်နှင့်အတူတစ်ဦးနုပျိုမိတ်ဖက်။ သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဇၩိ။ တချို့လူတွေကသူတို့ကပထမဦးဆုံးအကြံပြု:”ဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏အဖေ။”။ အချို့လူများကစစ်မှန်သည်တောင်းချက်ကအဘယ်အရာကို။ ပညာပေးရန်အချိန်ကြာမြင့်အဲဒီလူ။ အခြားသူများများအတွက်၊အကောင်းဆုံးတုန့်ပြန်မကြာခဏလျစ်လျူရှုဖို့မိုက်သို့မဟုတ်အပြုံးနှင့်အကြံပြုသူသို့မဟုတ်သူမတစ်ဦးကောင်းတဲ့နေ့။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲမဖြစ်နိုင်ထိုသူတို့လျစ်လျူရှုဖို့။ တချို့ကြုံရချိန်မှာသင့်ရဲ့မျက်နှာနှင့်ဝယ်လိုအားအသိသက်ဘယ်လောက်သင့်ရဲ့ရည်းစားနှင့်အသက်ဘယ်လောက်ရှိနေတယ်။ မရနိုင်လျှင်သင်အကိုက်သင့်ရဲ့နှုတ်ခမ်းနှင့်ကြကုန်အံ့ချော်သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အများကြီးစိတ်ဖိစီးမှုကိုင်တွယ်ရန်ကျော်နှင့်အတူအနှစ်။ ကြိုးစား ရှာဖွေရန်လူမှုအဖွဲ့၏အစိတ်တူကိုယ်တူတစ်ဦးချင်းစီအပေါက်နှင့်အတူတစ်ဦးရယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အသက်တာ၌အခါအဟောင်းလူတစ်ဦးရှိပါတယ်”အဲဒီမှာနေခဲ့တဲ့ထိုပြုသောအမှု”နှင့်အတွေ့အကြုံမှသိသောအခါတစ်ခုခုအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်။ အမကြာခဏဤအဖြစ်ဆိုးနှင့်ဆန္ဒအသစ်အရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစား။ အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ရှာတွေ့မှကျန်းမာဟန်ချက်အခါစေနုပျိုမိတ်ဖက်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အမှားတွေအခါမှလက်မခံကြောင်းအဟောင်းတွေနဲ့ပညာမိတ်ဖက်ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်မည်ကွဲပြားခြားနားအသက်အရွယ်နှင့်အတူ။ အချိန်ကျော်သငျသညျကြောင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်အနုပျိုလူတစ်ဦးအကောင်းလိင်မောင်းထက်အသက်ကြီး။ အဲသည်အမှန်တရားအတွက်စကား”ဒါဟာသုံးပါဒါမှမဟုတ်ရှုံး”ပါ။ အိုမင်းယောက်ျားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြကြောင်းလိင်သည်ကဲ့သို့မည်သည့်အခြားလေ့ကျင့်ခန်းအခါ၊သင်တက်ကြွစွာစောင့်ရှောက်သငျသညျထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့စွမ်းရည်ကိုတယ္။ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများကပေးပြီးနှင့်အတူခေတ်မီဆေးဝါးအတူကလေးသူငယ်နှင့်လိင်ကစားစရာအသုံးပွုနိုငျသောအားဖြင့်လိုအပ်သူများပိုပြီးကူညီ။ ဒါဟာအတွက်အရေးအဟောင်းလူတစ်ဦးကျူးလွန်ဖို့သူ့ကိုယ်သူ မိန္းကေလးရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်။ သူမည်မဟုတ်၊သူမကသူတစ်ဦးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ရှိလိမ့်မည်မိသားစုဖိအားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်။ ကိစ္စအများစုအတွက်၊မိသားစုတစ်မည်ဖြစ်ထောက်ခံအ တယ္။ အင္ငံျလူရဲ့မိသားစုကိုသူဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။ အများစုကမိသားစုများရှိသည်ငွနိုင်ငံခြားသူအမျိုးသားများကိုရွေးချယ်ရန်ရွှေ့ရန်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနှင့်အတူဖြစ်အငယ်မယား။ အရွယ်ရောက်သားသမီးသံသယအသစ်မယားအဖို့ကြိုးစားနေယူသူတို့၏အမွေဥစ္စာ။ အိုမင်းခြင်းမိဘများကိုသံသယသူတို့၏သားသည်အတွက်သူ၏ဒုတိယကလေးဘဝ။ ညီအစ်ကိုခံႂကြသောကြောင့်၊သူတို့မယားအမြဲဒီအကြောင်းပြောနေတာ’ဖျက်’။ ဒါဟာတစ်ခုခုသင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြင်ဆင်ပါနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မဝင်ခင်အ တယ္။ အသက်အရွယ်ကွာဟချိန်းတွေ့သည်တရားဝင်နည်းလမ်းရှာတွေ့ဖို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ပြုရန်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများကိုင်အယူခံ? သင်ပြင်ဆင်ထားနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အဇၩိ
ရှာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွက်ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒီမှာသြစတြေးလျအတွက်သင်ရောက်ရှိလာပါပြီအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်သြစတြေးလျဖြစ်ပြီ’့၏ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးအတွက်ရှာနေကြသူတစ်ခင်ပွန်းက။ ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့အခမဲ့ရိုနှင့်ရှာမာသတို့သမီးကို လက်ထပ်ပြီ’့၏စာရင်းများဖိလစ်ပိုင်နှင့်မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်သင်အထဲကရွေးဖို့အရွယ်မှရှစ်။ အမျိုးသမီးထံမှဖိလစ်ပိုင်သဘာဝကျကျနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်ဖစ္လာသဘောမှာရှာဖွေနေပြီးနောက်နှင့်စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးမိမိတို့၏ခင်ပွန်းနှင့်မိသားစုကဲ့သို့ဤသူတို့၏အမွေနှင့်မိသားစုတန်ဖိုးများကိုခဲ့သည့်အတွက်သွတ်တစ်လျှောက်လုံးသူတို့ကိုပါတယ္။ မင်္ဂလာပါ၊ငါ ။ ငါတစ်ခုတည်းအမွတ္ကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးမူကားဖူးဘူးဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးသုံးနှစ်အဘို့။ ငါသစ္စာနှင့်အများကြိုက်မယ်လို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးလိမ့်မည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနှင့်တစ်မိသားစုအဖြစ်ကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့ကြသောလမ်း၊ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမုသာဝါ၊ဒါကြပါဘူးကျေးဇူးပြုအကြှနျုပျကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်မဟုတ်လျှင်သင်ချင်အတူတူပါပဲ။ ငါလိုလူကိုခရီးဦးကြိုနှင့်အတူအတူကြိုက်အဖြစ်၊တစ်ဦးနားလည်မှု၊သစ္စာ၊ရိုးသားသော၊ကြင်နာမှုနှင့်ရိုသေလေးစားသောသူသည်ငါမသောက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများယူနှင့်မခိုးအဖြစ်လိမ့်မယ်အကြောင်းရင်းကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့။ စာဖတ်ခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့အပရိုဖိုင်နှင့်အံ့သြဖွယ်သောနေ့ရက်ရှိသည်။ ပဲမွမွ်ေဝမည္စိတ်ဝင်စားလျှင်ပိုကောင်းငါ့ကိုသိမှ။ ကျွန်တော်လွတ်လပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဒါပေမယ့်ငါ တစ်ဦးပွိုင့်ဖြစ်စေသောဘုရားသခင်သည်အမြဲအလယ်ဗဟို၏အစာငါ့တပြင်လုံးကို။ ငါတစ်ခုတည်းစစ်မှန်သောနှိမ့်ချဖို့မြေ၊ရိုးသားခြင်း၊သစ္စာစောင့်ခြင်း၊ပွင့်လင်းသောစိတ်၊ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၊နှင့်အတူခိုင်မာတဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားစံတန်ဖိုးများရှိသည်နှင့်အခိုင်မာသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငါ့ဝိညာဉ်ရေးရာတည်။ အလုပ်လုပ်အချိန်ပြည့်-ငါးရက်တစ်ပါတ်အတွက်။ အဘယ်သူမျှမနေလျှင်အခြားအလုပ်လှုပ်ရှားမှုများ၊အလိုရှိအပန်းဖြေအိမ်မှာစောင့်ကြည့်ရုပ်ရှင်များသို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်ငါ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာနှင့်ပျော်မွေ့န့်ညက်နှင့်အတူ။ ငါနဲ့တူအဆောက်အဦးအပြင်၊အဖြစ်အကြှနျုပျ၏အကြိုက်ဆုံးနေရာအရပ်။ တစ်ခုရှိသည်အလွန်ကြီးစွာသောပျော်ရွှင်တဲ့အသက်တာမှယခုအထိတစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်း။ ဟန်ရှိသည်ဖို့ငါ့အချိန်ကုန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်းအတွက်ရှည်လျားသောအချိန်အလုံအလောက်၊အချိန်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေမျှဝေဖို့ငါ့အသက်ကိုနှင့်အတူ။ ကျွန်တော်ရှာဖို့ငါ့ဝိညာဉ်သည်အိမ်ထောင်ဖက်၊သူတစ်ဦးမိတ်ဖက်ငါမျှဝေနိုင်ပါသည်အဆိုပါအကောင်းနှင့်အဆိုးကြိမ်နှင့်အတူကျွန်မသိရှိကြောင်းထွက်ရှိတစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည်ထင်နှင့်သင်ကဲ့သို့တူညီသောလိုလားခင္ဗ်ာ။ ငါသည်ယုံကြည်သောမိသားစုဖြစ်ပါသည်။ ငါယုံနှစ်ခုအတွက်တစ်ဦးချင်းအစဉ်အမြဲခံရသူနှစ်ဦးတစ်ဦးချင်းရှာဖွေဘုံမြေပြင်နှင့်သောသူလူနှစ်ဦးလက်နက်ချသူတို့ရဲ့အထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာမှ။ မလွှဲမရှောင်သာ ပျော်ရွှင်ဖြစ်ခြင်းစဉ်းစားပြီးချစ်ရသူတစ်ဦးအားဖြင့်လက်ခံသင်၌နေသောသူ။ ကျေးဇူးတင်စကားအတွက်အချိန်ယူဖတ်ရှုဖို့ငါ့အပရိုဖိုင်။ ကျနော်တို့အားလုံးမှောင်မိုက်ကာလကိုကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌။ နောက်ဆုံးမှာအတင်းလှည့်မှအမှောင်အလင်း၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မသိရပါဘူးသောအခါ။ ငါသည်အသက်ရှင်ငါ့အသက်ကိုနှင့်အတူရိုးရှင်းနှင့်အတူကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ယုံကြည်ခြင်း၏ဘုရားသ။ ငါအလေးအနက်ကတိကဝတ်ကြောင်းရန်ဦးဆောင်။ ကျေးဇူးပြုပြီးရေးတဲ့စာမှာငါ့အအီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရချက်တင်။ ငါဖို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းထက်ပိုချက်တင်သို့မဟုတ်နှင့်အတူစကားပြောသင်သိသင်ပိုကောင်း။ ငါအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်၊အနှောက်အယှက်မပေးပါဘူးလျှင်၊အရမ်းနုပျိုသို့မဟုတ်အဟောင်းအဘို့၊အဖြစ်ကြာမြင့်စွာငါတို့သည်နှစ်ဦးစလုံး။ နှင့်လက်ခံရန်အဆင်သင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်။ သူကသတိပြုမိသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အရွယ်ကွာဟသောသင်တန်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်အမြိုးသားရင့်ကျက်၏။ ငါမြော်လင့်ခြင်းသင်ဒီမှာပါ။ ကျွန်တော်ရှာဖွေနေခဲ့ကြရတယ်။ အမွတ္ကောင်းတစ်ဦးတည်းအသက်ရှင်ဖို့။ အခါသင်ရှိသည်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူမျှဝေ။ ‘မျိုးဖြစ်နှင့်ရဲရင့်’ပြီ။ ဟေ့။ ပဲကြည့်မနေပါနဲ့ငါ့အပရိုဖိုင်-ဟာငါလိုအမည္။ ငါလုပ်ချင် ငါ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုကိုတစ်နေ့။ အဆင်သင့်အခြေချ။ အသက်ရှင်ပြီးမေတ္တာအသက်တာအပြည့်အဝတည်ရှိဖို့။ အသက်ဆယ်အဖြစ်ပျက်သောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့တုံ့ပြန်။ အလုပ်များလူတစ်ဦးတနင်္လာနေ့ကနေ-စနေနေ့ငယ္ဆံုးငါအလုပ်လုပ်ကိုင်အဖြစ်အတြင္းအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနှင့်ကုမ္ပဏီ။ ကျွန်တော်စုဆောင်း၏အချိန်လေးအမှုအရာမဟုတ်။ ကိုလိုက်ရှာများအတွက်အလေးအနက်နှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေး။ ယခုအချိန် ။ ပဲငါ့ကိုအစက်စက်အမည္ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်နိုင်မပူပါနဲ့မကိုက်-ဟာဒါဟာငါ့အပျော်အပါးသိရန်သင်လက်ရှိတွင်မည်သည့်ရှက်ဖြစ်မနေပါနဲ့။ ဖြစ်ငါ့အသက်ကို၏မေတ္တာကို။ ငါပျော်မွေ့အိမ်ပြင်လှုပ်ရှားမှုများငါးဖမ်း၊စခန်း၊ရေကူးနှင့်များစွာသောပို။ ကျွန်မကြိုးစားချင်တယ်အသစ်အမှုအရာအကြှနျုပျအဘို့အများကောင်းနေ့ရှေ့ဆက် လူတိုင်းမြော်လင့်ခြင်းသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သင့်ရဲ့စံပြမိန်းကလေးတစ်ဦးဒီဆိုက်ထဲမှာ။ ဂုဏ်။ ငါျမစ္ႀပါတည်း၊အဘယ်သူမျှမ။ ငါမွှေး၊သစ္စာ၊ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၊နားလည်မှု၊ရိုးသားသော၊မိသားစုပိုင္စီး၊ကောင်းသော။ ငါဖြစ်၏ကဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကိုကြောင့်ငါအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့တစ်သက်တာလက်တွဲဖော်။ ငါအမျိုးသမီးတစ်ဦးရိုးရှင်းလွယ်ကူပေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုချစ်ရန်။ အမတ်ေတာလူတစ်ဦးနှင့်မည်သို့မေတ္တာနှင့်ရတနာအချစ်။ အတူ ဖွဲ့ဝင်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမွှေးအကြိုင်များ၏အသက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သြစတြေးလျစံပြအရပ်ဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အသင့်ရဲ့ဧရိယာ၊နယူးသူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်စိတ်ဝင်စားဖို့လူများပတ်ပတ်လည်ကနေသြစတြေးလျနှင့်အားလုံးကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ပို့စ်သင့်ရဲ့ဦးခ်င္းကြော်ငြာအခမဲ့။
သောချိန်းတွေ့ဆိုက်အကောင်းဆုံး ။ င္ငံျခားတူအလွန်အကျွမ်းတဝင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ သူတို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်မေ့လျော့သောဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ဒါကြောင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းမတူတန်းတူအပေါ်အဘယ်အရာကိုသူတို့ရန်အသုံးပြုကြသည်။ ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအသုံးဝင်သောကိရိယာကွောငျးတှေ့ဖို့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ။ ပဲဆိုတာကိုနားလည်သေချာပါစေသူတို့ကိုသုံးပြီးသီးသန့်ကန့်သတ်ထားမည်၏ရွေးချယ်မှုကိုအသေးတယ်။ သင်တို့ကိုမမြင်မကိုမကကြော်ငြာအတွက်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အဖြစ်တာအဖြစ်အခြားဆိုက်များ၊ဒါပေမယ့်ဒေသခံဖိလစ်ပိုင်မင်းသမီးအောင်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှု၏နေရာမှစာရင်းသူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်။ သင်တွေအများကြီးရအခမဲ့အရေးယူအပေါ်ဤသည်ဆိုက်ကို။ နှင့်အမျိုးသားများဆက်သွယ်နိုင်တကြင္းလံုးနှစ်ဆယ်လေးနာရီအခမဲ့။ သင်သာပေးဆောင်ချင်လျှင်သင်အပိုပြီးမကြာခဏတုံ့ပြန်စေလိုပါလိမ့်မယ်မကြာခဏတုံ့ပြန်။ အများအပြားရှိပါတယ်အိမ်၊အခြား ဆိုဒ်အကြောင်းကောင်းစွာရာထူးဖိလစ်ပိုင်အတွက်။ ကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်ကင္ယာသုံးစွဲတွေအကြော်ငြာခြင်းအပေါ်သင်အများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ရုံကြောင်းကိုသတိရပါကြော်ငြာဘတ်ဂျက်မှကြွလာသောအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားလူတို့။ ကြိုးစားပြီးပုံစံကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်။ အခြားအလူကြိုက်များ။ သငျသညျအကွောငျးတှေ့လိမျ့မညျအများအပြားမင်းသမီးအပေါ်အာရှနေ့စွဲသို့မဟုတ်အာရှအလှတွေဟာလည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ငါသည်ယနေ့အာရှနှင့်ဖိလစ်ပိုင်ကင္ယာ။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊ငါအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သာဤသုံးပါးဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ကြိုးစားတိုင်းသူတို့ကိုကြည့်ဖို့အရာသငျသညျအများဆုံးသက်သာခံစားရနှင့်အတူ။ ဒါဟာအရေးကြီးပါသည်ကြောင်းသဘောပေါက်ရန်အချို့သောမိန်းကလေးများအမည်မှတ်ပုံတင်အပေါ်အများအပြားဆိုဒ်များ၊အကြိမ်ပေါင်းများစွာတူညီသောအမည်များ။ လည်းရှိပါတယ်သူငယ်ချင်းတွေသူတက်လက်မှတ်ထိုး။ ဒီမှာရည်မှန်းချက်အမြင်ရန်သောနိုင်ငံခြားအမျိုးသားများနှင့်တကွကြီး၏မိန်းကလေးများနှင့်သောတဦးမှဆွဲဆောင်နေကြတယ်။မိန်းကလေး။ စမတ်ဖြစ်မှာပါ။ အခြားဆိုက်ထိုက်၏ဖော်ပြထား? ဒါဟာအပိုအချိတ်တက်’ဆိုက်ထက်အမှန်တကယ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နှင့်ရှာဖွေနေချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းထို့နောက်သင်တွေ့စေခြင်းငှါ။ ဆွဲဆောင်မှုအတွက်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ချိန်းတွေ့။ ရှာဖွေခြင်းတစ်ဦးတစ်သက်တာအဖော်မပါတစ်မူလတန်း၏။ ဒါဟာဖို့အရေးပိုင်ဤဆိုက်မှကြည့်လျှင်သင့်ရဲ့ရှေးကောကျအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး။ လျှင်ဖိလစ်ပိုင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်နေကြသည်။ သောချိန်းတွေ့ဆိုက်အကောင်းဆုံး ။ င္ငံျခားတူအလွန်အကျွမ်းတဝင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ သူတို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်မေ့လျော့သောဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ဒါကြောင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းမတူတန်းတူအပေါ်အဘယ်အရာကိုသူတို့ရန်အသုံးပြုကြသည်။ ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအသုံးဝင်သောကိရိယာကွောငျးတှေ့ဖို့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ။ ပဲဆိုတာကိုနားလည်သေချာပါစေသူတို့ကိုသုံးပြီးသီးသန့်ကန့်သတ်ထားမည်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကို၏သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းရရှိနိုင် ။ အခါသင်သည်အခြားတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ရှင်ရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်၏တွေ့ဆုံရန်နှင့်ချိန်းတွေ့ကြသူအမျိုးသမီးအတွက်အသက်ရှင်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲဖန်ဆင်းခဲ့သည်အားဖြင့်ကောင်းစွာအနက်အဓိပ္ပာယ်အဆွေခင်ပွန်းနှင့်ရက်စွဲများခဲ့ပါသည်အားဖြင့်ခရုပက်ကျိအၾကိဳက္ဆံုးအဖြစ်ဘောကန်။ ယခုပြုသောအမှုနိုင်ချက်ချင်းအင်တာနက်ကတဆင့်၊ဒီဇိုင်းနိုင်ပါသူ၏စံပြမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်ရှာဘို့အသူမ၏နှင့်အတူခလုတ်တစ်ခု၏တွန်း။ အချို့အထင်ဒီ ကြာလုံးထဲကမှန်းဆချက်ထုတ်ချိန်းတွေ့ဖို့လွယ်ကူစေသည်အတှေ့အတိအကျညာဘက် ။ စိတ်ကူးယဉ်သူကကျိုးနပ်စေသည်။ အခါမလြဲေနှင့်အတူဖိလစ်ပိုင်အလှမင်းသမီး၊အွန်လိုင်းကနေချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊သင်အလျင်အမြန်ရအစပြု၏စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ဆက်ဆံရေး။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောထွက်ပေါက်ကနေကိုးငါးခုမှလုပ်ပေးစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုထောင့်။ လူအချို့သည်မေတ္တာ၌လဲကျ၊လှုပ်ရှားဖို့ဖိလစ်ပိုင်နှင့်လက်ထပ်သူတို့ရဲ့အွန်လိုင်း။ စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါသာသေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းများ၏ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်။ စောင့်ရှောက်သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တက်နှင့်သင်၏မျှော်လင့်ချက်များလက်တွေ့သင်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခံစား၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံ။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်ဆုံး အသုံးပြုကြသောအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဖြစ်သက်ဆိုင်ရာနှင့်အတူလူအတော်များများ။ ဖိလစ်ပိုင်မင်းသမီးရှိသည်ကြောင်းလေ့လာသင်ယူနိုင်ငံခြားအမျိုးသားငတ်မွတ်ပြောပြရန်သူတို့စိတ်အားထက်သန်ပေးပို့ဖို့ပိုက်ဆံအဘို့အဆိုအစစ်အမှန်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးဘဏ္ဍာရေးပြဿနာ။ ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးတွေ’လမ္းမတ်’။ သူတို့စကားပြောကြားမိမိကိုယ်ကိုနှင့်အလျင်အမြန်ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဖို့အလုပ်ထဲကအများဆုံးရ သူတို့ရဲ့အချိန်အွန်လိုင်း။ ရှိပါတယ်ဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များမြှင့်တင်ရန်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှစ်ဆယ်တယောက်အသက်အနှစ်၊ဆယ့်ငါးကီလိုဂရမ်နှင့်လှပသောသူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်မည်မျှအဆယ့်ငါးကီလိုနှင့်၊အချို့ကိစ္စများတွင်၊သူတို့မပင်အဖြစ်မွေးဖွားသည်။ သတိထားဘို့အဘယျသို့တောငျးအဖြစ်အရာကိုသိ’ရောင်းချနေ။ နိုင်ငံခြားယောက်ျားမကြာခဏနှင့်အတူစကားပြောသူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းရက်စွဲများများအတွက်နာရီအနည်းငယ်ပြီးတော့သွားဖို့မိမိတို့ကိုးငါးခုမှ။ အချို့ ၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်မိမိတို့ကိုးငါးခုမှအလုပ်။ ဒရာမာကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းများမှာရာတွင်မင်းသ။ ဒီကစားထွက်သိသိသာသာကောင်းစွာအပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဒါဟာအဆန်းမဟုတ်ပါများအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိသည်ဖို့လေးငါးအမ်ိဳးအတွေးသူတို့အကြောင်းချစ်မျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့’စုံ’။ အခက်ခဲဆုံးသောအရာကိုလက်ခံဖို့အကြောင်းတွေပါဝင်နေအိမ်မှသူမ၏ခင်ပွန်းဖိလစ်ညစဉ်ညတိုင်း။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊သူအတွက်အင်တာနက်ကဖေးနှင့်အတူသူမ၏၊ခံစားခြင်း။ အ ၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းအားလုံး။ ဤအမြဲမမှန်ပါဘူးဒါပေမယ့်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ရပ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အခါမိန်းကလေးတစ်ဦးပထမဦးဆုံးထွက်စတင်သည်။ သူမ၏မိခင်သေဆုံးသွားပြီးသူမအဖေရဲ့အ ဖျားနာနှင့်ကလေးနို့ရည်လိုအပ်။ အဖြစ်တိုးတက်လာတာနဲ့အတူအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊သူမသိရှိလာသောနိုင်ငံခြားအမျိုးသားပြုကောင်းစွာတုံ့ပြန်မကဏ္ဍအတွက်ငွေသည်။ အဲအခါခလုတ် ပုံပြင်များအတွက်ဝမ်းသေံထိနာ့ေငြ။ သင်ကောင်းကိုခံစားရကြောင်း၊သူမသည်မင်္ဂလာ၊ဒါပေမယ့်ကိုယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်။ သင်တို့သည်မဖြစ်ကြလျှင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ထိုအခါဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောရွေးချယ်မှု။ ထိုခံစားကြည့်ပါအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်။ ကျဆုံး၌တပ်မက်။ မိန်းကလေးကိုကူညီပါလျှင်ထွက်နိုင်ကြသည်။ ကိုယ့်သဘောပေါက်ဒါဟာအားလုံးစိတ်ကူးသည့်တိုင်သူသည်ရောက်သင့်လက်နက်အတွက်။
များစွာသောငါ၏စာဖတ်သူတွေအပေါ်မှာငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် မေးများအတွက်အကြံဉာဏ်အပေါ်သူတို့ရဲ့မတ်ေတာဘဝတွေကိုနှင့်မိန်းကလေးများသူတို့အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံကြ။ သူတို့ကလည်းမေးသည်ငါ့အပေါ်အကြံဥာဏ်ချိန်းတွေ့တစ်ဘယ်လိုပြုမူ။ အများအပြားသူတို့ကိုသွားကြဖို့ပြင်ဆင်နေဖိလစ်ပိုင်မှခရီးသွားလာလှည့်ပတ်ပြီးအမျိုးသမီးဘယ်သူကိုသူတို့အလားအလာကောင်းတစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းအတူဆက်ဆံရေး။ ဒါကြောင့်၊ငါအတွက်ဤဆောင်းပါးကိုဝေမျှပေးခြင်းလည်းအကူအညီအခြားအမျိုးသားရစေခြင်းငှါ၊တစ်ရည်းစားသို့မဟုတ်ဇနီး။ ကျနော်တို့စူးစမ်းလိုမေးခွန်း:အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ချင်။ သွားနေတယ်ဆိုရင်များနှင့်အတူဖိလစ်ပိုင်အဘယ်သူမျှမရည်ရွယ်ချက်ရတဲ့၏အနက်၊အနောက်အရပ်နဲ့တူလိစ်၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၊အနီသို့မဟုတ်အဘူဖြည့်ဆည်းနိုင်၊သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်။ ဘားမိန်းကလေးအလုပ်အပေါ်ဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်နှင့်ဆက်ဆံ။ သူမ၏များအတွက်ဒါကြောင့်အားလုံးအကြောင်း။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အရာတစ်ခုခုအတွက်ရှာဖွေနေပိုပြီး အနက်ထက်မကြည့်အတွက်သွားသြားဘားအဘားမိန်းကလေးအပေါ်တာဝန်။ တွေ့တဲ့မိန်းကလေးကအွန်လိုင်းသင်သွားမီနှင့်လိုပဲသူမ၏ဆက်ဆံပြီးသင်ကုသခံရဖို့ချင်တယ်အလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အိပ်မက်။ လျှင်သင်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်မိန်းကလေးနှင့်အတူဖြစ်၊ပြီးတော့တစ်ဦးဆက်ဆံရေး၊စီးပွား။ မရောထွေးချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်။ ဘယ်လိုသင့်ပြုမူသင့်ရဲ့နေ့စွဲစဉ်အတွင်း? ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်၊ဒါပေမယ့်မရိုင်းစိုင်းဖြစ်။ တဦးတည်း၏အများဆုံးထိုးစစ်နှင့်အမှုအရာလုပ်နိုင်မှာကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်ခြားအမျိုးသမီးနေစဉ်သင်ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်။ ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့လျှင်သင်သည်တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်ဆက်ဆံရေး၊သို့မဟုတ်တောင်မှပဲရတင်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျော့လျှင်သင်အဆက်မပြတ်ထွက်စစ်ဆေးနေအခြားအမျိုးသမီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကို။ ကြကုန်။ မယ္အိုေအတွက်သူမ၏ပရောနှင့်အတူအခြားယောက်ျားသို့မဟုတ်ထွက်စစ်ဆေးအခြားယောက်ျား၏”အထုပ္”ပြီးနောက်သင်ရုံများအတွက်ပေးဆောင်ညစာစားပွဲနှင့်ခရီးဘို့နှစ်ဦးအတွက်ပည္နယ္တ။ ကာင္ေလးက။ လမ်းလျှောက်မြန်လွန်းလို့။ ကြပါဘူးဒါကြောင့်လမ်းလျှောက်မြန်၊ဒါကြောင့်ထားခဲ့လျှင်သူမ၏နောက်ကွယ်မှသောကြောင့်သင်ဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်လမ်းလျှောက်မြန်၊သူမစေခြင်းငှါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဖြင့်ချွန်။ တောင်းလျှင် သူမဘယ်မှာသူမကစားရန်အလိုရှိ၏၊ထိုသူတို့၏အများဆုံးပြောလိမ့်မယ်”သင်မှတက်”။ သူတို့ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်။ များစွာသော အလွန်၊လွန်ချွန်များကြောင့်အသက်ရှင်။ မဒီလမ်းမှားသို့မဟုတ်ကြိုးစားမှအလွဲသုံးစားမှု၏အနေအထား။ ဥပမာအားဖြင့်၊ကျော်ဆောင်နှင့်အတူနေ့စွဲ။ ပွင့်လင်းဖြစ်လုံလောက်စေရွေးချယ်တော့သူသိတယ်သူမ၏ခံစားချက်များ၊နှင့်အလိုဆန္ဒများကိုရေတွက်။ ဤအတွင်းတွင်အနိုင်ရလိမ့်မည်ကိုအဓိကအချက်များ။ သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်သင်ပိုင်ခွင့်၊သင်ပေးခြင်းအားသူမ၏ခံစားချက်အခြားသူတယောက်မျှမတတ်နိုင်လိမ့်မည်ကိုးကွယ်မှုကိုသင်တို့၏အကြောင်းကြောင့်(လျှင်ကောင်းတစ်ဦးအမျိုးသမီး)။ သင်လုပ်နိုင်နောက်တစ်ခုကသင်ကအနိုင်ရဖို့အမှတ်အဖြစ်စိတ်ဝင်စားသူမ၏ယဉ်ကျေးမှုအတွက်။ ကြိုးစားစားအစာကိုသူမ၏တိုင်းပြည်၊ကြိုးစားသင်ယူဖို့သူမ၏ဘာသာစကား။ လျှင်သင်ပူဇော်ကြသည်တစ်ဦးထူးခြားဆန်းပြားအစားအစာမထင်သင်စားနိုင်၊ငြင်းကျေး။ သင်သည်မကျင့်လျှင်တူဖိလစ်ပိုင်အစားအစာ၊အကြံပြုချင်သောအရာတစ်ခုခုစားအမေရိကန်သို့မဟုတ်ဥရောပတိုက်ရဲ့အရွယ်အစားအစာ။ ခံရတဲ့လူကြီးမားတဲ့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်တြဆွဲဖို့ခင်ဗျား။ မည်သူပွင့်လင်းတံခါးများအတွက်သူမ၏မေးမြန်း၊သူမ၏အလုပ်နှင့်သူမ၏ဆုံးဖြတ်ဘယ်မှာသွားကြဖို့? သတိရ၊လုပ္ပိုင္ခြ။ အခါသင်ဖော်ပြရန်၊သင်မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်အမှန်တကယ်ဆု၊ရှားပါးအဖိုးတန်ကျောက်မျက်အခြားအမျိုးသမီးလိမ့်မည်စာသားတွေကိုခိုးယူရန်ကြိုးစား။ ပြီးနောက်အနည်းငယ်ရက်စွဲများ။ သင်ခံစားရလျှင်သင်အမှန်တကယ်အတူအသီးအသီးအခြားမေးမြန်း၊သူမ၏ဖြစ်လာရန်သင့်ရည်းစား။ မချန်မထားပါနဲ့ဆွဲထားကြား၌ဖြစ်”အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူအကျိုးခံစားခွင့်”သောကြောင့်ကြောင်းဆိုလိုလိမ့်မည်သင်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်ဒါပေမယ့်ဘာမှမ။ သူမဖို့ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဟုခြေလှမ်းထွက်၏။ ပြည့်တန်ဆာ။ လျှင်သင်ချိန်းတွေ့ကြသောရှေးရိုးစွဲမလွန်ပွင့်လင်းလိုလားတဲ့ ၊အလွန် ဘယ်လိုအကြောင်းလှကိုပြည့်တန်ဆာအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်သော်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတည်ရှိ၊ဒါကြောင့်အထိခိုက်မခံခေါင်းစဉ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာညီမျှကြောင်းပြောနေတာ၏ဘုရား၊နိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်လူမျိုးရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်အပြောကောင်းတဲ့အကြောင်းတော်ဝင်မိသားစုအတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံ။ အငြင်းပွားဖွယ်ရာခေါင်းစဉ်အတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ သင်ရှိပါကတစ်ဦးနဲ့လိင်တန်ဆာ၊ကောင်းမဖော်ပြထားသောကြောင့်ပြောင်းလဲစေမည်အကြောင်းသူမ၏စိတ်အကြောင်းသင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်။ မကျူးလွန်လျှင်မခံစားရဘူး။ ကြိုက်သူဖြစ်ပါသည်။ အမြဲရှိပါတယ်ရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့်အမှားအတွက်ချိန်းတွေ့။ သင်နဲ့တွေ့ဆုံရပါလိမ့်မယ်ရူးသူများ၊သံသယရှိသူလိမ်လည်သို့မဟုတ်အချို့သောအကြောင်းသင်ရုံမကအတူလိုက်ဖက်တဲ့။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်သင်ရှိသည်ဆိုလိုတယ်မှပြန်ထွက်အလျင်အမြန်။ သင်နဲ့တွေ့ဆုံရပါလိမ့်မယ်ရွှေ လိမ့်မည်ဟူသောအချည်းနှီးသင့်ရဲ့အိတ်ကပ်။ ရိုးရာ ။ ရှိပါတယ်အချို့အလွန်အစဉ်အလာ သောအပြည်နယ်များ။ လျှင်သင်တွေ့ဆုံဤအမျိုးအစားဖိလစ်ပိုင်မိန်းကလေး၊သင်ရှိသည်မဟုတ်နိုင်ဘဲလက်ထပ်နှင့်သူမ၏။ သင်အမှန်တကယ်အလေးအနက်နှင့်အတစ်ခုဖြစ်သည်၊ထိုအခါလက်ထပ်နှင့်သူမသည်အစဉ်သင့်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာယူမှနောက်ထပ်အမှုအရာ။ ဘာသာတရား။ သင်တို့သည်မဖြစ်ကြလျှင်ခရစ်ယာန်သို့မဟုတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးစွာဖြစ်။ မပြောကောင်းဘူးဒါေၾကာင့္ဘာသာတရားကြောင့်များစွာသော အလွန်ဘာသာရေး။ အရဝီကီသုတေသန၊တစ်ခုလုံးကိုလူဦးရေရဲ့ဖိလစ်ပိုင်သည်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း(အဓိကအားဖြင့်ရောမကက်သလစ်)။ စကားပြောစက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောပတ်ပတ်လည်လေး။ အများဆုံး သူဗေးတစ်ဖြစ်ကြသည်၊အကြောင်းပြောနေတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတို့ကိုပတ်ပတ်လည်မိတ်ဆွေတွေကိုထိုးစစ်ဖြစ်ပါသည်။
လျှင်ငါ၌နေထိုင်ပြီးပြီးခဲ့ဖြစ်ရန်လိုကြောင်းလမ်းလျှောက်တက်မှမိန်းကလေးများနှင့်ပေးခြင်းတို့ကိုငါ့အရေအတွက်အတိုင်းငါဖြစ်၏နှင့်အတူ ငါဖြစ်နိုင်သည်အတွက်အကျဉ်းထောင်အားဖြင့်ယခုမှာအနည်းဆုံးငါသည်ဖြစ်လိမ့်မယ်’ဃကနေအားလုံးသည် အဝယ်န်းကျင်နေထိုင်ခဲ့သည့်နေရာတွင်။ အဖြစ်မှန်အတွက်မှားတစုံတခုမျှမရှိနှင့်အတူလျှောက်လှမ်းတက်ဖို့မိန်းကလေးတစ်ဦး၊သူမ၏သူမ၏ရည်းစားနှင့်ပေးကမ်းနှင့်သူမ၏အရေအတွက်ကို။ အဘယ်သူမျှမထိခိုက်မှုမရှိပုပ်၊နှင့်အမှန်တကယ်သည်အတိုင်းအဘယ်သို့ငါပြုရမည်။ ဒါပေမယ့်ငါအတော်လေးအချို့အရင်ပြုသကဲ့သို့အများကြီးရှိပါတယ်သကဲ့သို့ငါပြုမိပါပြီဒီနေရာမှာမကောင်းတဲ့အမှုအရာဖြစ်ပျက်။ ငါလက်ငါ၏အရေအတွက်၊ဒီအတိတ်တစ်နှစ်။ အစဦးတွင်၊ငါရေးကိုသာအဏန်းပေါ်မှာတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းစက္ကူနှင့်အကြောင်းငါ့ကိုအတယ်အ ငါးစာသားပြန်ပန္သြားသည္။ ထိုအခါတစျနေ့ကငါစတင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရေးသတ္တိနှင့်ချစ်စရာအပေါ်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အရာခိုင်နှုန်းခုန်ဖို့အကြောင်း။ ဒါကအများကြီးပိုကောင်းပြန်လာအပေါ်ငါ၏ရှည်ရှည်အချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာသွားတစ်ဦးကုန်တိုက်နှင့်မမြင်မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုချဉ်းကပ်ထိုက်အတွက်တစ်နာရီ။ ဒါမှမဟုတ်သူများသာသင်မြင်လမ်းလျှောက်ကြပါတယ်အလက်အတွက်လက်ကိုအတူတစ်ရည်းစား၊သို့မဟုတ်နှင့်အတူသူတို့၏မိခင်၊သို့မဟုတ်အတွက်အချို့သောအခြားမကောင်းတဲ့ချဉ်းကပ်မှုအစက်အပြောက်။ သတိထားမိရာကုန်တိုက်နှင့်အကြောင်းရှင်းရန်အကောင်းဆုံးနေရာသင့်ရဲ့ချဉ်းကပ်မှု။ သင်ဟာကိုယ့်ရန်လိုအပ်သည်သေချာအောင်သင်ပြုအချို့နှင့်အတူကိုလေးစား၊ ပြုံးကြပါနဲ့လည်းစော်ကားလျှင်မိန်းကလေးအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း။ အကယ္ကုန်တိုက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်၊ထိုအခါလမ္းကျိန်းသေအဆိုးရွားဆုံးနေရာငါကြိုးစားခဲ့ကြ။ သိသာအကြောင်းရင်းများ အများကြီး အကြုံလေးကိုချဉ်းကပ်သူတို့ကိုလမ်းပေါ်မှာထို့နောက်သူတို့၏အတွင်းကုန်တိုက်။ ငါမြင်လျှင်ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦးအပေါ်လမ္း၊ျကြိုးစား၊ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်သွား။ ကျနော်တစ်ခုသင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအပိုကောင်းထိုဒေသ၏မြို့အတွက်ပိုပြီးဖွယ်ရှိသင်ရလိမ့်မည်စာသားပြန်သည်။ ငါပုံဆင်းရဲနွမ်းမိန်းကလေးများသူများဖြစ်လိမ့်မည်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖို့တွေ့ဆုံတဲ့”ကြွယ်ဝသော”င္ငံျ၊ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်အတူကောင်းစွာ-ချွတ်။ ဒါကြောင့်၊စိတျထဲမှာကြောင်းစဉ်းစားသည့်အခါနေရာမှဖြည့်ဆည်း ။ ကျနော်ပထမဦးဆုံးဒီလိုလုပ်၊ငါဝေး အကြောင်းထက်ငါအခု။ ဒါဟာတကယ်ကိုအဆင်မပြေတဲ့အခါချင်တဲ့အစားသင်သည်မိန်းကလေးတစ်ဦးတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းစက္ကူနှင့်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ယူ၊သို့မဟုတ်သူမကစောင့်ရှောက်အမေး”အဘယ်သို့သောအကြောင်း။”နှင့်ရှင်းလင်းစွာမသိချင်ပေမယ့်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်လိုက်ခြင်းဖြင့်။ အခါသင်အလုပ်သင်သည်သင်၏ချဉ်းကပ်မှု၊ တစ်ဦးကောင်းပွင့်လင်းအာကာသအတွက်ကုန်တိုက်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကြည့်၊ယခုသင်ချဉ်းကပ်အစည်အတူဧရိယာများအပြားမျက်စိသင်ကြည့်နှင့်သင်ချင်တယ်အားလုံးပြု ၏။ အများဆုံးအဆင်မပြေအချိန်ငါ့အဘို့ခဲ့မှာဖြစ် ကုန်တိုက်အတွက်အတြက္ပါ။ ငါထောင့်လှည့်မြင်လျှင်၊ဤသည်အလွန်ၡမ်ား ခဲ့သူတစ်ဦးအစိုင်အခဲရှစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်တစ်ကိုးသောအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဖိနပ်စတိုးဆိုင်ထွက်ခွာသူမ၏သိမ်းဆည်း။ ကျွန်မအကြောင်းဆယ်ငါးပေနောက်ကွယ်မှသူမ၏သတိပြုမိသောလူအစုအဝေးထွက်မှုန်းတိုင်အောင်၊ငါအသက္ကိုငါ၏အစက်အပြောက်သွားအတွက်။ မှန်အတိုင်းကျွန်မပြောဟိုင်းနှင့်သူမ၏ပြောပြဘယ်လောက်တော်တော်သူမသည်အောင်တစ်ဦးသို့လှည့်အဘို့အ။ သူမတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခြင်းနှင့်ေျပာကျေးဇူးတင်ပါသည်သင်နှင့်ငါကြိုးစားမှလက်ကိုသူမ၏ငါ့မယ်။ မေမဘာလုပ်သေချာပြီးနောက်အဆိုပါအမျိုးသားများရဲ့ရေချိုးခန်းတံခါးကိုဖွင့်လှစ်၊နှင့်သုံးယောက်ယောက်ျားတွေကြိုးစားဖို့လမ်းလျှောက်ထွက်မှလွဲတံခါးကိုတွန်းသို့။။။။ အခုတော့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးအလှည့်တွင်မှကုန်တိုက်ဘက်၊ငါဖြစ်ရတဲ့အချို့ကြီးမားသောဆို့နှင့်ထိုမိန်းကလေးသည်တစ်ဝက်ကိုရောက်ရှိဘို့စက္ကူနှင့်ဆိုတော့အားဖြင့်တံခါး။ အမှုအရာကဲ့သို့အချိန်ဖြစ်ပျက်၊သူတို့ အဆင်မပြေနှင့်အရှက်ဒါပေမယ့်ဘာပဲ။ ငါအမှန်တကယ်မဟုတ်သောကြိုးပမ်းမှုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လနှင့်ပတ်သက်။ ခဲ့လမ်းလျှောက်အဆိုပါကုန်တိုက်အတွက်တစ်နာရီနှင့်လက်ထဲကငါ့အရေအတွက်နှစ်ကြိမ်။ ငါပြီးသားအမိန့်တစ်ဦးန့်ညက်များအတွက် နှင့်ငါ့အပေါ်လမ်းပွင့်ကောက်ဖို့ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနောက်အပူဆုံးၡမ်ား မြင်သာတဲ့အလုပ္။ သို့သော်အစမှရှိခဲ့ပြားအနီရောင်အလံများတစ်ဦး)သူမတွန်းကလေး ၊ခ)သူမနှင့်သုံးအခြားဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး။ ငါအမှန်တကယ်အတော်လေးသေချာခဲ့၊သူမ၏အမေနှင့်နှစ်ဦးစလုံးသူမ၏အစ်မ။ ပုံမှန်ဒါကတစ်ဦးမျှမ ငါရှောက်သွား၊ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ဤသည်အပူဆုံး ငါမြင်ကြပြီအတွက်အလုပ္။ ဒါကြောင့်၊ငါကြိုးစားရှာဖွေ၊ညာဘက်ချဉ်းကပ်မှုအစက်အပြောက်သည်နှင့်ကိုယ့်ငါ့ကံသူတို့လမ်းလျှောက်ဖို့အတူတူစားေလိုကောက်ဖို့ငါ့အစားအစာမှတက်။ ယခုအခါမိခင်နှင့်အစ်မအတွက်လမ်းလျှောက်နှင့်အခြားတဦးတည်းထွက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့သူမ၏ဖုန်းတော့နည်းနည်း၊တကယ်တော့ငါ့ပစ်ခတ်။ ငါတက်သွားနှင့်ပြောပြသူမ၏အလှဆုံးမိန်းကလေးငါမြင်ကြပြီအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊လက်သူမ၏အရေအတွက်ကို၊။ ယခုငါရှိသည်ဖို့အရငါ၏ညစာစားပွဲ။ ငါပြီးသားအများအတွက်ပေးဆောင်နှင့်ငါမပစ်ပယ်ဒေါ်လာငါးရာကျော်အရှက်။ ငါသွားဖို့အနီးအနားမှာစတိုးဆိုင်ဖို့ကြိုးစားလာဘ်မိန်းကလေးအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသွားတက်ခူးငါ့အစားအစာအဖြစ်၊ဒါပေမဲ့သူမ ထွက်အားဖြင့်အရူး ဖစ္ပြားႏႈန္းေျပာမျှပင်ပူဇော်။ စားသောက်ဆိုင်ရှိဖန်ခွက်ပြတင်းပေါက်အပေါ်အရှေ့နှင့်မိန်းကလေးသည်သိသာထင်ရှားထိုင်အားဖြင့်ညာဘက်တံခါး။ ငါအနားမှာရပ်နေထောင့်နှင့်ကံကောင်းရဆာရဲ့အာရုံစိုက်မှုအောကျမေ့နှင့်ဆောင်ခဲ့သောငါ၏အစားအစာထဲက။။။။။ မဟုတ္ရပါ၊ဒါဟာတကယ်ကိုအဓမ္မဆုံးဖြတ်ချက်၊ဒါပေမယ့်သူမကယ့်ကိုပူပြင်းခဲ့၊ငါအဖန်ဖန်ကြိုးစားရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျှင်၊တူညီသောအရာအနာဂတ်မှာ။ ကျွန်တော်ကတော့စုံစမ်းသွေးအပို့စ်ဇီး၏စူပါ-လျှို့ဝှက်ချက်မူပိုင်ခွင့်မည္ခုတော့တကယ်သော်လည်းဘာမှကဲ့သို့ထင်ရစေသည်သင်ဘဲအကြို-ရေးထွက်လက်မှမိန်းကလေးများအလုပ်လုပ်မယ်။ ဝမ်းနည်းမရှိနိုင်တကယ်ကမျှဝေဥစ္စာဖြစ်၏၊ငါသား အဝယ်ဤနေရာနှင့်အတူ၊နှင့်ရှိသည်မဟုတ်အခြားလူတွေသုံးအတူတူပါပဲရုံသေချာအောင်သင်ထားအဖြစ်ဖန်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအပေါ်ကဟာသူတို့ဖတ်၊ သူတို့ကိုငါထွက်ကြိုးစားငါ့တစ်ခုတည်းသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်ဘယ်လောက်အလာဘ်သင်ဖို့ကမ်းလှမ်းသောမိန်းကလေးမှာမဟုတ်ဘူးကောက်သင့်ရဲ့အစားအစာသင်တို့အဘို့အ။ ကၽြန္မရဲ့တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံဒါပေမယ့်ဒီမှာအရမ်းရယ်ရတယ်သူမကသူမ၏နှင့်အတူကျွန်မကိုသူတို့နှစ်ဦးစလုံးမှာကြည့်လို့ကျွန်တော်ဖို့ကြိုးစားနေအစား၊သူတို့ကိုကျွန်တော်ကမ်းလှမ်းတူငါးဆယ်ကိုဆက်လက်မပေးဆောင်ထက်မဆိုပိုပြီးသောရှောင်ရှားဖို့အနည်းငယ်ရှက်ဘာ၊သင်အချိန်အများကြီးရှိသည်ကမ္ဘာအတွက်သွား၏နံပါတ်။ အများစုကအမျိုးသမီးမခေါ်ပါနဲ့။ ယောက်ျားတွေရှိသည်ပထမဦးဆုံးဖုန်းဆက်ဖို့။ ဆိုက် မေတ္တာကြီးမားလိမ်လည်။ သူတို့ပိတ်ဆို့ငါ့အအခမဲ့အကောင့်၊သူတို့ပိတ်ဆို့။ အခု။ ကျွန်မအတွက်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်။ သူတို့ပို့ချင်ငါ့ကိုအသစ်အစားထိုးကုတ်တင်းသူတို့မလုပ်ကြပါဘူး။ သတိေပးခ်က္ေ။ အလွန်ကြီးစွာသောလိမ်လည်။ သူတို့အလိုရှိသည်။ အဘယျသို့လေးစား။ ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလေးစားဖို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက့်ငါရှိသည်ဘယ်တော့မှတစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချက်တင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစဉ်အမြဲရိုသေလေးစား။ အင်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြပြီမဟုတ်၊ထိုသို့ပေးဆောင်ဒီနည်းကရိုက်စားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအခမဲ့ဆိုက်။ သူတို့ပိတ်ဆို့သင့်ရဲ့အကောင့်ကို၊ကြာငါးမိနစ်သစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါ ပြီးတော့ကိုယ့်မည္အတူတူမိန်းကလေးသင်သည်အစာအခမဲ့အဘို့အပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့မိန်းကလေးဖော်ပြခဲ့သည်သင်တို့အဟုတ်သည်၊ဒါကြောင့်သူတို့ကပိတ္ထားေ၊ကဖြစ်ပျက်။
ငါဘယ်လိုဖြည့်ဆည်း မိန်းကလေးများ။ အဖြေများ
အဆိုပါအကြံပေးချက်များအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ငါမခွဲခြားဒါပေမယ့်ကျနော်ယုံကြည်ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်မှဆောင်ခဲ့။ ဟုတ်ကဲ့၊အများကြီးရှိပါတယ်ရွှေတူးပေးမထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်(မလိုအပ်လိမ်လည်)မှာရှာကြသည်သောအများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝ။ အများစုမှာအမျိုးသားများမဟုတ်သေချာပေါက်နှောင့်အယှက်ခြင်းအားဖြင့်ဤ။ အချို့ရုံဦးကဆိုရတဲ့ ကြလိမ့်မည်ဟု၊သူတို့ကိုများအတွက်ဘာပဲရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်မည်အကြောင်း(အပေါ်အမျိုးသမီးရဲ့အစိတ်အပိုင်း)။ တချို့အမျိုးသမီးကိုပဲေျမကြက္အလိမ်များ၊လွင်ပြင်နှင့်ရိုးရှင်းသော။ မဟုတ်သင်လိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်ဘယ်သူရဲ့အဘို့အရှာနေတဲ့ကောင်လေးများအတွက်အကြောင်းပြချက်များအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ ကြၽန္ေ နဲ့တခါတလေငါကြိုက်တတ်တဲ့အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများကျော်လစ္ပိုင္ဘို့တိကျတဲ့အကြောင်းပြချက်။ ငါမေၾလစ္ပိုင္၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်လေးစားတန်ဖိုးအချို့ရိုက်င့္ခ်က္မဲ့အားဖြင့်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဖြစ်လွတ်လပ်ရေး၊တိုးတက်သောအတွေးအခေါ်(ပွင့်လင်း-)၊ဒါဒါဘွား။ အဆိုပါအချက်ဖြစ်ပါတယ်၊သင်တွေ့ဆုံရန်ချင်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတန်းတူမှာ၊သင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ ပညာေရး၊ထောက်လှမ်းရေး၊ရှုပ်ထွေးမှုများတွေ(ထိုအခါငါအသုံးပြုမှုဒီအခေါ်အဝေါ်ထိထိရောက်ရောက်)။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထင်ကရတစ်ခုမှာအဆိုးဆုံးအမှုအရာအခါသင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုမသင်စိန်ခေါ်။ အဆိုပါပြဿနာနှင့်အတူဤဆိုဒ်များသည်၏အရည်အသွေးမျိုးသမီးတွေ့ပါမယ်။ ကျွန်မပြောပြမယ်၊ပြီးတော့ကျွန်မဟာကျိန်အားဖြင့်ဤအများကြီးရှိပါတယ်၊ပညာတတ်၊ဆွဲဆောင်မှုများ၊စသည်တို့ကို။ ။ ဒါကြောင့်ပဲတစ်ဦးအမှုနည်းလမ်းတွေရှာဖွေသင့်အဘို့အကလူနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဤကဲ့သို့သော။ သူတို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာတာဖြစ်သူတို့၏အချိန်ကိုဖြုန်းအတွက်စကားပြောခန်း၊သင်သိလျှင်အဘယ်သို့ငါဆိုလို။ ငါတွေ့ငါ့ရည်းစားအပေါ်။ ။ အမျိုးသားအပျြောအကြား မိန်းကလေးအွန်လိုင်းချက်တင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏နိုင်ငံခြားရည်းစား၊သူတို့ကကဲ့သို့လဲလှယ်ရန်မှတ်စုများ။ အခါကြီးထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊သူတို့ငါ့ကိုမေးခြင်းထားရှိပါကမည်သည့်ရရှိနိုင်သောအထီးမိတ်ဆွေများကအိမ်မှာပြန်ရှာသောသူများအတွက်ကောင်းတဲ့ရည်းစား။ မသို့သွားလိင်ချက်တင်သိမှီတိုင်သူတို့ကိုအမှန်တကယ်ကောင်းစွာ၊သူတို့ထင်လိမ့်မည်နည်း။ အရာတစ်ခုမှာသူတို့နှစ်သက်များဆုံးဖြစ်ပါသည်သော်လည်းမည်သည့်အဆိုးဒေါသသို့မဟုတ်စိတ်မရှည်။ သင်ရှိသည်ဖို့ကောင်းတဲ့အားလုံး အချိန်။ ဒါဟာအများကြီးပိုကောင်းလျှင်သင်စီစဉ်နိုင်ဖို့ခရီးထွက်ရှိပြီးခရီး။။။။ ဆိုလိုတာကယူနေသောဆက်ဆံရေးကိုအလေးအနက်ထားမည်ကောင်းစွာသင်ရှေ့ဆက်ယှဉ်ပြိုင်၏။ အများဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်အရေးအသားအများအပြားတွင်တစ်ချိန်က၊သင်မူကား၊တကယ်နားလည်မှုကိုအဒုက္ခမှသူမ၏တွေ့ဆုံရန်နှင့်သူမ၏မိသားစု၊သူမအမည်နာမအခြားသူများ။ အရမ်းရှိပါတယ်အနည်းငယ်အသက်အရွယ်တားမြစ်ထားပါတယ်၊သို့မဟုတ်အပြေးပြိုင်ပွဲ။ ဒါကြောင့်၊သူတို့ထင်သောအရာကိုမျှ၏အရာတစ်ခုခုသည်လူနှင့်အတူသွား-အရာတစ်ခုခုအမျိုးသမီး။ ပြင်ဆင်စောင့်ရှောက်ဖို့နှစ်သို့သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်။ သူတို့ငွေအများကြီး၊နှင့်အစဉ်ကောင်းမိန်းကလေးများအဘို့သင်တို့မေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပိုက်ဆံ၊အားလုံးအတူတူ၊အနည်းငယ်ပိုက်ဆံပေးသည်သိပ်ပျော်အဝေးအချိုးအစား၏ထွက်ဖို့အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်။ ဝယ်ယူဝန်များအတွက်သူမ၏ဆဲလ်ဖုန်းဖြစ်ပါသည်၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသူမတူထိတွေ့စောင့်ရှောက်သင်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲ။ အပေါ်ရယူပါ။ ပျံသန်းအတြက္ပါ။ စစ္ေသို့ဟိုတယ်နှင့်သွားဖို့ဆို။ ကုန်တိုက်၏အာရှ၊ ကုန်တိုက်သို့မဟုတ်မည်သည့်။ သူတို့အတွက်ကြည့်ရှု။ ၎င်း၏ဖန္တီးနိုင်တာထက်ပိုပြီးအစဉ်အဆက်ချင်တယ်။ အချို့တို့သည်ပေါ့ပေါ့လိင်အဘို့အပျော်စရာ။ ယူ သူတို့အဖို့ညစာ။ အချို့သောလိင်လုပ်သားများနှင့်သင်ပေးချေမည်အကြောင်းဒေါ်လာငါးဆယ်အမေရိကန်သည်တညဉ့်။ ရုံးမိန်းကလေးများအစဉ်အမြဲအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့ကော့ကေးလေးကိုလက်ထပ်ဖို့သူတို့သင်သိရုံလမ်းဖြင့်သူတို့မှာကြည့်ပါ။ နောက်ထပ်နည်းလမ်းကဒီကိုလာပြီးဖီးလ်ရဲ့၊ပူးပေါင်း ကင္ယာနှင့်ပွင့်သတ်မှတ်ရက်စွဲတစ်ခုအတွက်နေ့လယ်စာနဲ့ညစာ။ သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်သင့်ရဲ့အပြည့်အဝ။ ထောင်ဖက်၏အမှိုက်င္ငံျခားသားမ်ား၏အမျိုးမျိုးသောအသက်အရွယ်သွားရန်ရှိနှင့်တွေ့ဆုံအမျိုးသမီး။ နိုင်လျှင်ပူဇော်မည်သည့်အကြံဉာဏ်သော်လည်းမအိပ်။ ရိုးသားဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအချိန်မရှိဘူးသူတို့အပေါ်မှာဦးဆောင်လမ်းပြ။ သူတို့ကကိုအလွယ်တကူကျသင်တို့နှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ရှက်၏မှသင်၏အားသာချက်ယူသောရိုးသားလျှင်သင်ဖို့ရွေးချယ်ကြပါတော့။ ဒါပေမယ့်ငါဂုဏ်အပေါ်သင်ရွေးချယ်တဲ့အ ။ သင်စိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အားလုံးမိန်းကလေးများမည်မဟုတ်သင်လိုက်ရှိပါတယ်အဖြစ်သင်ထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင်အမည်ရအများကြီးအာရုံစိုက်သောကြောင့်၊သင့်ရဲ့အဖြူ၊ငါမြင်ယောင်ကြည့်မယ်လို့။ ဒါပေမယ့်မကျင့်ကြကုန်သောရ၏။ အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းဖို့နည်းလမ်းသည်မိန်းကလေးများအတွက်လူတစ်ဦး။ ဒီမှာလာနှင့်မြင်ရပါလိမ့်မည်ရှိပါတယ်လွန်းများစွာသောကောင်းတဲ့ချိုမြိန် မိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြောင်းအတိုင်းသွားမှလိုင်းပေါ်ထိုသို့ပြု။ ငါ့ဇနီးတစ်ဦးမိတ်ဆွေကိုသူမအသက်ရှင်၏ချွတ်ယောက်ျားတွေသူမ၏များပေးပို့ခြင်းပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့မှာအင်တာနက်ကဖေး။ တခါတရံတစ်စုံတစ်ဦးမှကြွလာသူမ၏တွေ့ဆုံရန်ဎ။ သူမသုံးစွဲတညဉ့်သူတို့နှင့်အတူပြီးတော့အရွေ့အပေါ်။ မိန်းကလေးများရှိပါတယ်လိုင်းပေါ်တွင်ဖြစ်ကြောင်းအမှန်သူတို့၏နှုတ်မူကား၊သင်သိရဘယ်တော့မှလိမ့်မည်သည်အထိသင်မြင်သူတို့ရဲ့နေအိမ်များနှင့်မိသားစုများ။ တွေ့ဆုံ မိန်းကလေးများအွန်လိုင်းအလွန်ရိုးရှင်းသောအလေးသာသင်လိုအပ်စစ္ေငါ့ခွဲနှင့်မှတ်ချက်များအတွက်ဒီကိုသွားပြီးတွေ့ဆုံရန်အလွ မိန်းကလေးငယ်များထို့ကြောင့်လျှင်သင်ခံစားနေရပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်နည်းလမ်းရှာတွေ့၊ဒါကြောင့်ခက်ခဲလွန်းဖို့စတင်စကားပြော၊နှင့်တိုက်ပွဲရရှိရန်အမျိုးသမီးမှအိမ်ပြန်လာနှင့်အတူ၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤအမယ်တော်ဆေးခန်း ၏အသေးစိတ်အစီအစဉ်ကောက်နေများအချိန်မှာမိန်းကလေးများတက်သွားလေရာရာ၌သင်သင်ယူပါလိမ့်မယ်အတိအကျဘာကိုတြဆွဲဖို့နိုင်အောင်ဒီဇိုင်းအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဖို့’တဲ့ကောင်လေး’ရရှိသူအများစုဟာအမျိုးသမီး။ ၏မယ်တော်ဆေးခန်း လည်းပညာသင်အပေါ်ဘယ်လိုမြင်ရန်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘာသာစကားနှင့်အသိအခါတိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးချစ်ခင်ဗျား၊သင်သင်ယူပါလိမ့်မယ်ကြီးမားသောကွာခြားချက် အကြားအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားနှင့်မည်သို့အတိအကျအောင်မြင်စွာအသုံးပြုချိန်မှာအမူအဖို့ချဉ်းကပ်မှု။ ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊တိုင်မီဘုရင်မကြီးမှတဆင့်သွား”အဆိုပါပြောင်းလဲမှုအသက်တာ၏”၊ဗသူမ၏လစဉ်”ကျူးကျော်ခြင်းအားဖြင့်အနီရောင်တပ်မတော်”လျှို့ဝှက်ချက်မှအများပြည်သူ။
အဘယ်ကြောင့်ရှိပါတယ်အများစုကအသက်အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများချိန်းတွေ့လူငယ် အမျိုးသမီးအတွက်။ ဖိလစ်ပိုင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့
ဒီမှာပုံမှန်ဇာတ်လမ်း:တစ်ဦးသောသူသည်မိမိအနှောင်းပိုင်းတွင့်ရယ္(ငါတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဖြစ်အဟောင်းအဖြစ်များ)မှကြွလာသောအဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ(သို့မဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံ၊သို့မဟုတ်ကမ္ဘောဒီးယား၊သို့မဟုတ်။)။ သူသို့မဟုတ်ကွာရှင်းရန်အစီအစဉ်။ သူထင်သောအမျိုးသမီးအတွက်သူ၏နေအိမ်တွင်တိုင်းပြည်များမှာ၊ကြောက်မက်ဘွယ်သော ၊မသင့်အဘို့အချိန်းတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထောင်။ သူသည်နာကျင်ခြင်းအားဖြင့်အဲဒီအမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်အခမဲ့ချိုးဖျက်နှင့်သူ့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းနှင့်အတူ၊အမျိုးသမီးအဘယ်သူသည်အမှန်တကယ်လေးစား။ ဤအမျိုးသမီးပဲဖြစ်လေးတစ်ခု(သို့မဟုတ်တစ်ခု၊သို့မဟုတ်တစ်ခု။)မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အသက်အရွယ်အတွက်အပူတပြင်းအကြား။ အဖြစ်မှန်ဤလူတို့သည်များသောအားဖြင့်အောက်ခြေ စည်:၊န္တနှင့်လိုလား။ ဒါပေမယ့်သာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်များ-သူတို့၏နက်ရှိုင်းသော၊နက်ရှိုင်းသောသို့ -။ ဒါဟာအားလုံးမှဆင်းအနာစိမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အကျိုးစီးပွားနှင့်ဖျော်ဖြေသမျှကိုစိတ်ကျွမ်းဘားများမှာလိုအပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းသောကြောင့်အိုကေရဲ့လူအများလိင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများအတွက်င်းတို့၏နှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်။ အဖြစ်မှအဘယ်ကြောင့်မအဆိုးဆုံးအမျိုးအစားလိင်ဒိတ်ထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊ရိုးရှင်းသောအဖြေအများစုကအနည်းဆုံးလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်ဥပဒေကြောင်းအရအသက်အရွယ်လိုအပ်ချက်များနှင့်၊ဝမ်း၊အမျိုးသမီးသူတို့ရွေးချယ်မကြာခဏလုံလောက်တဲ့စမတ်စစ်ထုတ်ဖို့အကွာလောက်ငွေကိုသူတို့ဘဝတိုးတက်ဖို့။ အထူးချွန်ဆုံးရသည်၎င်းတို့၏ပညာရေးနှင့်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များ(ကား၊အိမ္၊)ထိုအခါပေါ်ရွှေ့ချိန်းတွေ့ဖို့ငယ်ယောက်ျား။ တိုတိုပြောရရင်၊ဖိလစ္ပိုင္သတိပြုမိကြသည်သောဤအသက်ကြီးမဟုတ်အထူးသဖြင့်ကြီးမြတ်၊ဒါပေမယ့်သူတို့လုပ်အဘယ်သူမျှမကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုအလိုရှိသူတို့ကိုပယ်သွားဖြစ်စေ၊အသိအ များမှာထည့်သွင်းဖို့ငွေအစားဆင်းရဲ။
ဒါကြောင့်၊သင်စျေးကွက်အတွက်အလွန်အဆင်းလှသော မယားသို့မဟုတ်ရည်းစား။ သင်မည်သို့သူမ၏တွေ့ဆုံရန်? တဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါသည်သုံးစွဲဖို့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ ၏ဝန်ရှိတယ်အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသင်ဘယ်မှာဖြည့်ဆည်းနိုင်လှ မိန်းကလေးများ။ ဒါပေမယ့်အခမဲ့ဆိုဒ်များကျိုးနပ်။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်ကကြိုးစားချင်တယ်ဆိုရင်၊ငါအပြေး အာရှချိန်းတွေ့ဆိုက်ရဲ့သက်သေနှင့်အတူလူကြိုက်အရှာကြံအမျိုးသားများအ ။ ထုတ်စစ်ဆေးသငျသညျစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်-အဲဒီလိုအာရှချစ်။ ဆိုဒ်များလဲကျဖို့လေ့တစ်ခုမှာသို့အများအပြားအမျိုးအစား:အရွယ်ရောက်ပြီးပုံစံဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို။။။။ေ ဖုဘယ်မှာဆိုဒ်များသင်၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ၡမ်ားစကားပြောအစည်းအဝေးများ။ အထွေထွေ သန္ဓေချိန်းတွေ့ချစ်ပိဳင္သြား။ အ ရည်းစား။ ထိုအခါငါ့အစွန်အဖျားအခေါင်းမှဖိလစ်ပိုင်နှင့်ပေးထုိင္းအလှမယ်။ မနိုင်လျှင်လည်အာရှတိုက်အချိန်မရွေးမကြာမီ၊ထိုအခါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့အွန်လိုင်း ချက်တင်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေ။ သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်တစ်ချိန်က၊သင်စကားပြောဖို့အနည်းငယ်အာင္လႈိင္၊ထို့နောက်သင့်အားသင်စေပါလိမ့်မယ်အချို့သောကြီးမြတ်သူငယ်ချင်းတွေဒီနေ့ဖြစ်ခြင်း၊ငါလမ်းလျှောက်သို့ငါ့အနီးအနားရှိမြို့အချို့စျေးဝယ်။ ငါရှိ၏၊ငါအားဖြင့်ဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်မည်မျှအရှေ့တိုင်းသတို့သမီးငါမြင်၏။ ရှင်းလင်းစွာအာရှအမျိုးသမီးများမှာအလွန်ရေပန်းစားနေဆဲအတူဗမာပါဘူး၊တကယ်တော့သူတို့နေဆဲလူကြိုက်များနှင့်အတူအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ရှိခြင်းဝင္ပါကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ နှင့်ကျွန်တော်မှာရှာဖွေနေခဲ့ကြအဘို့အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင်အာရှဇ အတော်လေးခဏတစ်ဘို့။ သုံးနှစ်အတွက်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ငါအသက်ရှင်သောအကြောင်းသက်သေပြနိုင်မကြာခဏတွေအများကြီးယူတော့ရှာဖွေဖို့အာရှဇနီးသည်ထက်သင်ထင်စေခြင်းငှါ၊ဒါကြောင့်တခြားအဘယ်သို့အယူရှာဖွေဖို့ဖိလစ်ပိုင်မယား၊နှင့်မင်္ဂလာပါယောက်ျားတွေ၊လိုငါကျနော်ယုံကြည်လို့မရနိုင်ကြပြီမဟုတ်တင်ထားသည့်ဆောင်းပါးအပေါ်ဤသည်ဆိုက်ကိုအတွက်ငါးနှစ်အတွင်းမှာ။ သို့သော်လည်းဖိလစ်ပိုင်ရှိနေဆဲ၊အမ်ိဳးနေဆဲအတွက်စိတ်ဝင်စားရှမယား၊ငါရှိခဲ့ဖူးပါတယ်ရှနှင့်အပြန်အနည်းငယ်ပိုကာလ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ဦးဆက်ဆက်ပြီးအပေါ်တက်တော့ခင်ဗျားအတွက်စျေးကွက်အဘို့အဆင်းလှသော မယားသို့မဟုတ်ရည်းစား။ သင်မည်သို့သူမ၏တွေ့ဆုံရန်? တဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါသည်သုံးစွဲဖို့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ ၏ဝန်ရှိတယ်အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသင်ဘယ်မှာဖြည့်ဆည်းနိုင်လှ မိန်းကလေးများ။ ဒါပေမယ့်အခမဲ့ဆိုဒ်များကျိုးနပ်။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်ကကြိုးစားချင်တယ်ဆိုရင်၊ကျွန်မအနေနဲ့ရှချိန်းတွေ့ဆိုက်ရဲ့သက်သေနှင့်အတူလူကြိုက်အရှာကြံအမျိုးသားများအ ။ ထုတ်စစ်ဆေးသငျသညျစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်-အဲဒီလိုအာရှချစ်။ ဆိုဒ်များလဲကျဖို့လေ့တစ်ခုမှာသို့အများအပြားအမျိုးအစားများ: အရွယ်ရောက်ပြီးပုံစံဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို။။။။ေ ဖုဘယ်မှာဆိုဒ်များသင်၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ၡမ်ားစကားပြောအစည်းအဝေးများ။ အထွေထွေ သန္ဓေချိန်းတွေ့ချစ်ပိဳင္သြား။ အ ရည်းစား။ ထိုအခါငါ့အစွန်အဖျားအခေါင်းမှဖိလစ်ပိုင်နှင့်ပေးထုိင္းအလှမယ်။ မနိုင်လျှင်လည်အာရှတိုက်အချိန်မရွေးမကြာမီ၊ထိုအခါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့အွန်လိုင်း ချက်တင်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေ။ သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်တစ်ချိန်က၊သင်စကားပြောဖို့အနည်းငယ်အာင္လႈိင္၊ထို့နောက်သင့်အားသင်စေပါလိမ့်မယ်အချို့သောကြီးမြတ်သူငယ်ချင်းတွေ သတို့သအွန်လိုင်းအလွန်ကြီးစွာသောနိုင်ပါသည်ရှိရာဝက်ဘ်ဆိုက်သင်အဆက်အသွယ်လုပ်နှင့်အတူလှပသော မိန္းကေလးအွန်လိုင်း။ ဆိုက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်လူသိများဖိလစ်ပိုင်သတို့သဆုံးအွန်လိုင်း။ သတို့သအွန်လိုင်းအမျိုးစပ်ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၊နိဒါန်းအေဂျင်စီနှင့်ခရီးသွားကုမ္ပဏီအားလုံးတဦးတည်းသို့လှိမ့်။ သင်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ သတို့သအွန်လိုင်းကြည့်တဲ့အရည်အသွေးအတွက်စိတ်ဝင်စားဆိုရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့မြင်ကွင်းတစ်ခု၊ထို့နောက်ငါချင်ပါတယ်အဖြစ်ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်လျှင်သင်ကထွက်စစ်ဆေးငါ့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်-မေတ္တာကွန်။ အာရှချစ်ဆက်သွယ်ကမ်းလှမ်းရာအခမဲ့အာရှဆက်ဆံရေးနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး။ေဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးထံမှဖိလစ်ပိုင်။ ဒါဟာအစအလွန်ကြီးစွာသောဆိုက်ကိုဒီနေ့ဖြစ်ခြင်း၊ငါလမ်းလျှောက်သို့ငါ့အနီးအနားရှိမြို့အချို့စျေးဝယ်။ ငါရှိ၏၊ငါအားဖြင့်ဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်မည်မျှအရှေ့တိုင်းသတို့သမီးငါမြင်၏။ ရှင်းလင်းစွာအာရှအမျိုးသမီးများမှာအလွန်ရေပန်းစားနေဆဲအတူဗမာပါဘူး၊တကယ်တော့သူတို့နေဆဲလူကြိုက်များနှင့်အတူအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ရှိခြင်းဝင္ပါကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ နှင့်ကျွန်တော်မှာရှာဖွေနေခဲ့ကြအဘို့အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင်အာရှဇအဘို့အအတော်လေးခဏတစ်ခု။ သုံးနှစ်အတွက်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ငါအသက်ရှင်သောအကြောင်းသက်သေပြနိုင်မကြာခဏတွေအများကြီးယူတော့ရှာဖွေဖို့အာရှဇနီးသည်ထက်သင်ထင်စေခြင်းငှါ၊ဒါကြောင့်တခြားအဘယ်သို့အယူရှာဖွေဖို့ဖိလစ်ပိုင်မယား၊နှင့်ဒီနေရာမှာအချို့ထံမှစာရင်းဇယားအ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ သူတို့ပြသောမြို့ကြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှဧည့်သည်ဒီဆိုဒ်မှလာ။ ဒီမြေပုံကိုမွမ်းမံပြအဓိကအဧည့်သည်များဆိုက်မှ:သင်မျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါ၊အများစု၏ဧည့်သည်မှဖြစ်ကြနီ၊ဘူနှင့် ။ ကရကျိုးနပ်မယ့်စိတ်တွင်သည်းခံခြင်းအဘို့အရှာဖွေနေချိန်းတွေ့ဘို့ဆိုဒ်များ ။ သင်လက်ျာအရပ်မှလာမယ့်။ အ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များလမ်းညွှန်ချက်များများစာရင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားအကောင်းဆုံး ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဆိုဒ်များနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးသမိုင်း၏အောင်မြင်သောအကြားလက်ထပ်ထိမ်းမြား နှင့်အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများပါဝင်:ဖိလစ်ပိုင်နှလုံးရက်စွဲအာရှတိုက်တွင်ချယ်ရီပွင့်လာသောအာရှနမ်းသောအခါအာရှချိန်းတွေ့ဘို့ဆိုဒ်များ
သင်ရှာနေနေကြတယ်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဖိလစ်ပိုင်မူကားမသိရပါဘူးဘယ်မှာစတင်ရန်? တစ်ခုလုံးကို နိုင်ငံ၏အလံသည်သို့ကွဲကွာအဓိကဒေသများ၊ျမာက္ပိုင္း နှင့်တောင်ပိုင်း ။ ဒီအချက်ကိုနှင့်အတူရှိကျော်ရာပေါင်းများစွာသောကျွန်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ခြိမ်းခြောက်သို့မဟုတ်ပင်ခက်ခဲအပေါ်စတင်သို့မဟုတ်ဘယ်မှာသွား။ ရှိပါတယ်စဉ်တွင်အဓိကအမြို့မြို့နှင့်လူသိများတဲ့အရပ်ကဲ့သို့ သို့မဟုတ် မြို့၊ရှိလည်းများများ၏ဝှက်ထားသောဘဏ္ဍာနှင့်အခြားအလှ၊စိတ်လှုပ်ရှားစရာအရပ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အလွန်ကြီးစွာသောလူမျိုးနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ရှာအမျိုးသမီးများ၏အိပ်မက်။ လာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအဆင်းလှသောမိန်းမကိုရှာဖွေရန်ပင်ဇပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်၊သင်ရုံရှိသည်ဘယ်မှာကြည့်ဖို့ကိုသိ။ ဤလှပသော၊ဝှက်ထားလျက်ရှိသောဘဏ္ဍာနှင့်ကိုဘို့၊လက်ျာမထိုက်မတန်ကိုရှာဖွေ။ ခင်လက်ျာထဲသို့ငုပ်၏အချို့ကမ်းခြေကမ်းခြေမြို့၊ရန်ကျေးလက်အရပ်ကြကုန်အံ့ရဲ့အဖုံးတစ်အလွန်ကောင်းတဲ့၊ဝှက်ထားသောအကျင့်နေဆဲရှိတစ်မြို့၏စပိန်နှင့်သင်တန်း၏ဖိလစ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုပျော်မွေ့ရန်။ ၊ငါ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်အံ့သြဖွယ်နေရာကိုရောက်တယ်ဆိုရင်သင့်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဒေသခံအမွေ၊အထင်ကရအဆောက်၊လှသောအသင်းတော်များ၊နှင့်သင်တန်း၏ကမ်းခြေ သာသုံးဆယ်အတွင်းတစ်နာရီမိနစ်။ အစိတ်အပိုင်းများတောင်ပိုင်း ကဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့အနီးဆုံးအဓိကမြို့ကြီးများသို့မဟုတ်ရုံးရဲ့၊ဒါပေမယ့်ဖို့ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်ရသွားနှင့်အတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုခုဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောရာအရပျဖွင့်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ဒီမှာအလွန်ရင်းနှီးဖော်ရွေသည်၊အထောက်အကူဖြစ်စေဆီသို့ဦးတည်ခရီး၊ကော်ဖီလုံးဝအကြည်နူးဖွယ်။ ဆိုရင်ပို၏”လူမှုလိပ်ပြာ”ဤအရပ်ဖို့စတင်။ သို့ဆိုရင်တော့အရက်ဆိုင်နှင့်ကြီးမားတဲ့ညဥ့်အခါမြင်ကွင်းဤအချက်မနေရာအတွက်၊ဤတစ်အများကြီးပိုအေးသို့မဟုတ်အနှေးအရှိန်အဟုန်ရပ်ကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်နေထိုင်။ အမျိုးသမီးများလည်းအလွန်ရင်းနှီးဖော်ရွေသည်၊ထိုအကြောင်းကြောင့်ခရီးမမကြာခဏဒီပွဲချင်းပြီးဒါမကြာခဏကြောင့်သင်ပိုမို”ဝှက်ထားလျက်ရှိသောကျောက်မျက်များ”။ သင်စွန့်စားမှုအမျိုးအစား? လှပသောပြည်နယ်နှင့်ခြောအချို့၏အလှဆုံး၊အကြင်နာ၊မေတ္တာ၌အမျိုးသမီးများ၏အားလုံး။ အားလုံးပတ်ပတ်လည်အများအပြည့်အဝကျောင်း၊တောင်ခွင့်အလမ်းများ၊ခရီးသွား၊စခန်း၊နှင့်ပို။ နီးပါးတိုင်းမြို့ငယ်လေးအကြောင်းသင်ဖြတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ အရှိကိုခရီးသြားမ်ား၊သာဓကအမထက်လူအသင်တွေ့မည်မှာအနိမ့်ဆုံးအားဟောပြောနိုင်မှအနည်းဆုံးအခြေခံပညာ။ စကားပြောအနည်းငယ်က့္ဂ္သင်ကူညီနိုငျလျှင်ပင်၊ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ကြည့်ရှုသင်ဘာလုပ်သင့်။ လူကြိုက်အများဆုံးအတွက်ဆွဲဆောင်မှု အ ရာအ္ဂူ၊တွေ့ရှိသောမြို့ ။ ဂူဒီမှာတန်ချိန်၏ပျော်စရာသည်၊သင်သွားနိုင်ပါတယ်ဖောင်၊၊တောင်နှင့်ပို။ အားလုံးနီးပါးအနီးအနားမြို့ရွာအချို့မျိုးရှိသည်၊ထိုအလျှင်မ၊တင္မည္သူတို့ ဆိုင်ရာများမှာအဆင်ပြေစတိုးဆိုင်များ။ ပင်ဒါကြောင့်၊ထိုင်နေ၏အပြင်ဘက် စတိုးဆိုင်နှင့်အနည်းငယ်အအေးသူများသို့မဟုတ်အစားသင့်ရဲ့ဇဉ်သည်မြား၊နှင့်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်လူသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့အပါအဝင်အလှများ၊အမျိုးသမီးအကြောင်းနှစ်သက်သောမည်ဖြစ်ကြောင်းဖြည့်ဆည်းဖို့သင်နှင့်သင်ပြ။ ဆိုရင်ဘတ်ဂျက်အပေါ်၊သို့မဟုတ်ရိုးရိုးအဖို့ရှာဖွေနေခံစားကြည့်ပါရိုးရှင်းသောအမှုအရာဘဝမှာယူရန်အတွက်ဒေသခံယဉ်ကျေးမှုနှင့်စူးစမ်းတော့ အလွန်ကြီးစွာသောရာအရပ်သို့သွားရန်၊ဘုရားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကျွန်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင် အဆင်းလှသောနှင့်အခြားအရာ၌ဝှက်ထားသောဘဏ္ဍာကိုနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ဒေသခံများနှင့်ခရီးရောနှော။ နေစဉ်ရိုးရှင်းတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဘို့ကြီးသောခံစားအချို့သောအရသာ၊ပင်လယ်၊လျှော့ပေါ့၊နှင့်ထွက်စစ်ဆေးနေအမျိုးမျိုးသောအယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ။ အများကြီးရှိပါတယ်ဆင်းလှသောအနီနှင့်အခြားအဆောက်အအုံအမွေအကြောင်းအပေါက်ကွဲမှုမှသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ကမ်းခြေမှာအဘယ်သူမျှမလျော့နည်းအပြည့်အဝအဖြူသဲနှင့်ပွင့်လင်း၊အပြာရောင်ရေ။ လည်းရှိပါတယ်၊အများကြီးတည်း၊အထောက်အကူဖြစ်စေ၊နှင့်အထွက်အမျိုးသမီးတွေ့နိုင်ပါသည်အားလုံးသည်ကျော်ကိုဒေသခံမြို့နေရာနဲ့ကမ်းခြေ။ ဒါဟာတစ်လူကြိုက်များများအတွက်ဦးတည်နေ့ခရီးစဉ်၊နှင့်အများအပြားလစ္ပိုင္လာမှာမှန်မှန်ခံစားဖို့ဆိုဒ်များ၊ပျော်ပွဲစားရှိသည်၊နှင့်လူမှုရေးရာ။ လည်းအဆင်ပြေတည်ရှိပြီးမှသာတစ်နာရီမှအဓိကမြို့လေဆိပ်တွင်တွေ့ရ ၊ဖိလစ်ပိုင်။ ခခုိးယူပြီးအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြင်ကွင်းထက် အချုပ်နေရာရောက်ရန်၊လူသစ်တွေ့ဆုံရန်၊နှင့်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်အနီးအနားမြို့များအပြည့်အဝစတိုးဆိုင်များ၊ဈေးများ၊ကဖေး၊နှင့်ပို။(မြို့၊)။ အဲရဲ့လှိုင်းကြီးမှာ၊ တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်၊နှင့်အများကြီးတတ်နိုင်သောလှိုင်းသင်ခန်းစာအားဖြင့်ဒေသခံလစ္ပိုင္-နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောလူသစ်တွေ့ဆုံရန်နေရာနှင့်အတွေ့အ ၏အိပ်မက်များ၏။ သင်မြင်တဲ့အတောင်တွေကတကယ့်ဘဝမှာအသား၏အမျိုးအစားနှင့်အရာသင်လိုချင်မှနိုးထဖို့တနံနက်နှင့်ကြည့်ဖို့နိုင်မည်အဝေးမှသို့မဟုတ်မြင့်တက်တက်ထိုအခါယာတောင်အနီး မြို့၊၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နေရာကိုရောက်နှင့်ပါတယ်။ နှစ်ဦးအနီးအနားရှိကျွန်းစု နှင့် လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သောရောက်ဖို့၊ဒေသခံတွေအရမ်းဖော်ရွေ၊နှင့်တည်း ဒီမှာန့်အသတ်။ ရာသီဥတုမှာအလွန်ကြီးစွာသောအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံး၊ဒါကြောင့်သင်အမြဲပျော်မွေ့မြင်ကွင်းနှင့်လှပ၊တစ်ခုတည်း လမ်းလျှောက်ကမ်းခြေများ၊စျေးဆိုင်များ၊ဒေသခံမြို့နှင့်အနီးအနားကျွန်းများ။ ဆိုရင်တက်နေတဲ့အတွက်ငုပ်ခြင်း-ရေငုပ်စဉ်အတွင်းနေ့နှင့်ပျော်မွေ့အစည်တွေကအပြည့်အဝအထွက်၊အမျိုးအစား၊နှင့်နှလုံးကောငျးအမြိုးလစ္ပိုင္ထိုအခါအရှေ့ ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးကိုနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဲတန်နိမ့်ရန်နှင့်ရှိနေရာအနှံ့မြို့နိုင်မှာနေဖို့၊ စူးစမ်းကမ်းခြေ၊ပြီးထွက်စစ်ဆေးအဆိုပါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တံခွန်။ ခရီးစဥ္အေရရှိနိုင်ပါသည်နေရာတိုင်း၊ဒါပေမယ့်အညီအမျှရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူနှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ကျွမ်းဒေသခံဧရိယာအမင်္ဂလာဖြစ်ချင်ပါတယ်သင်ပြ။ အဲလည်းများများ၏လှပသောတောင်ပေါ်အပန်းဖြေစခန်းများ၊ဒါကြောင့်သင်လုပ်နိုင်အဖြစ်အနီးအနားမှဒေသခံဆွဲဆောင်မှုရှိသည်၊ထိုမြို့နှင့်အဆင်ပြေနေစဉ်။ ကျွန်းတစ်ခရီးဖော်ရွေရပ်များတန်ချိန်နှင့်အတူက္ရာ၊နှင့်အမျိုးသမီးစာရေးကြောင်းများမှာပုံမှန်အဆင့်အချို့ကျောင်းအတွက်၊နှင့်အခြားသူများအကြောင်းအလုပ်ကိုမှာ၎င်းတို့၏မိသားစုရဲ့ဒေသခံစျေးကွက်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ ဒါကြောင့်၊ဒါကြောင့်ကဲ့သို့လွယ်ကူသောင့်သို့လမ်းလျှောက်စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်ဖးဆင်းသက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အတွေ့အ ၏အိပ်မက်များ၏။ အများအပြားကျွန်း၊မြို့နှင့်ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအမှန်တကယ်အဆုံးမဲ့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူ၊အဆင်းလှထူးခြားတဲ့၊စိတ်လှုပ်ရှားစရာအရပ်ကိုကြည့်ရှုရန်။ လူများ၏အချိုးအမျိုးသမီးများအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလုံးအဝှမ်း၊မခက်ခဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခြားတွေ့ဆုံရန်တစ်ကောင်းတဲ့ ။ အဆိုပါနေရာများ ဒီမှာဖော်ပြထားကြသည်၊နှင့်အစဉ်အဖြစ်မကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုအားင္ငံျခားများများနေဆဲရှိပါတယ်ဒေသခံကျွမ်းကျင်သူများနေထိုင်ကြောင်းမှာဖော်ရွေမှုကလူ၊နှင့်ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကအညီအမျှကြိုဆိုပွဲနှင့်ဖတ်ရှုခွင့်ရ။ မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင်သင်ရှာအမျိုးအစားများတည်ထောင်ခြင်း၊ကမ်းခြေ၊သို့မဟုတ်ခရီးရက်ကဲ့သို့သင်မျှော်လင့်၊သွားအတွက်ဒေသခံက့္ဂ္တန်းနှင့်ရိုးရိုးပဳႏိုင္ရန္အတွက်ပတ်ပတ်လည်စားသောက်ဆိုင်၊ကဖေး၊နှင့်ထွက်ဆွဲထားဖို့သေချာမကြက္သင်ရက်စွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခု။ သတိရ၊ပဲအစည်းအဝေးလစ္ပိုင္၊အထွေထွေအတွက်၊ဖြစ်နိုင်ဖို့အဓိကသော့ချက်အစည်းအဝေးကောင်း အမျိုးသမီး၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကန့်သတ်ရန်သာ”အေးချဉ်းကပ်”။
အခါအားဟောပြောသူတွေခဲ့ဖူးမှတောင်ဘက်-အရှေ့အာရှ၊ရှိမယ့်တဦးတည်းမဏ္ဍိုင်ကြားအထူးသဖြင့်မကြာခဏ:ဒေသခံအမျိုးသမီးများမှာဆင်းရဲ၊အနိမ့်အဖူးနှင့်ရိုးရှင်း။ နှင့်အတန်ငယ်မှန်ကဲ့သို့နိုင်ငံများရှိမြန်မာနှင့်ကမ္ဘောဒီးယား။ သူတို့အရပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့သဖြင့်စစ်ပြီးသော၏သိသိသာသာထားလူအမြောက်အဝေးအောက်ကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်အာရှတိုက်တွင်။ သို့သော်၊အမှန်တရားအကြောင်း၊အမျိုးသမီးအတွက်ဖိလစ်ပိုင်အများကြီးပိုပြီးခေတ်မီဆန်းပြားနှင့် ထက်သူတို့ရဲ့အမြောက်အမေရိကညီအစ်မ။ ဟုတ်ကဲ့၊အလုပ္မဲ့။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ကြေညာချက်။ တကယ်တော့ကြီးမားသည်။ သင်ထင်စေခြင်းငှါ၊ငါသည်လည်းအများအပြား ပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်အခါ၊ဒါပေမယ့်အဘွားကျွန်တော်နှင့်အတူအခိုက်အဘို့၊ငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အဘယ်ကြောင့်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိလူဦးရေ၏ရာလူသန်းအစိမ်းမှအခန့်သုံးရာသန်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌။ သော်ငြားလည်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံပတ်ပတ်လည်ရှိပါတယ်၊တက္ကသိုလ်များ-ကိုယ့်နှစ်ဆယ်ထက်လျော့နည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊နှစ်တက္ကသိုလ်နှင့်ကောလိပ်။ ဒီပိုဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးရရန်အဆင့်မြင့်ပညာရေးသင်ယူနိုင်ငံခြားဘာသာစကားနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တစ်ခုအကျိုးစီးပွားအတွက်ယဉ်ကျေးမှု၊အနုပညာနှင့်ခရီးသွားလာထက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌။ အခြားစကားများတွင်၊ ရှိရန်အတွက်အထက်အဆင့်မီအနောက်တိုင်းအမျိုးသမီးနှင့်အတူ၊ငါးရေးကွာခြားချက်စေသူတို့ကိုပိုပြီးချဉ်းကပ်၊စိတ်အားထက်သန်များအတွက်လိင်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချသည်။ ဤဆောင်းပါး၌၊ငါမျှဝေပါလိမ့်မယ်၊ဤအကြောင်းပြချက်များအပါအဝင်၊တဦးတည်းစေသည် ငမ်းငမ်းဖြူယောက်ျားနှင့်နှစ်သက်သူတို့အပေါ်မှာဒေသခံပါဘူး။ ငါအစောပိုင်းကပြော၊တချို့ကတောင်ဘက်-အရှေ့အာရှနိုင်ငံများအသေကောင်ဆင်းရဲသားမူကား၊ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော၊အများဆုံးအမျိုးသမီးအတွက်ဖိလစ်ပိုင်အသကြားဓာတ်ဖေဖေ၊သို့မဟုတ်ပွန်သို့မဟုတ်”။ ယောဟန်က”ပေးဆောင်သူတို့လိင်များအတွက်။ တကယ်တော့၊ဤသည်ရှေးရိုးစွဲတိုင်းပြည်နေရာအများစုမှာလူဖြစ်ကြ၏ခရစ်ယာန်အဘယ်မှာကွာရှင်းတရားမဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်၊အဆိုပါ၏စိတ်ကူးအိပ်ပျော်နှင့်အတူလူအတွက်ငွေသည်အဆုပ်မှသုံးမိန်းကလေး။ သေချာတာပေါ့၊အများအပြားမိန်းကလေးငယ်များအတွက်အလုပ်လုပ်ကြဘူးအရက်ဆိုင်နှင့်အနီရောင်အလငျးကိုခရိုင်ဒါပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့ရဲ့သောတိုင်းနိုင်ငံအဘို့-နှင့်ကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးသင်ဝယ်နိုင် ရဲ့မေတ္တာ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာပဲရှာချင်တယ်အချစ်ခင်ပွန်းကသူတို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မှဖြစ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောရေရှည်မှာအတွက်။ ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသားအလိမ်-နှင့်အမျိုးသမီးအတွက်ဦးချစ်ကြောင်း ပိုမယားဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်သင်သည်သင်၏ ရည်းစားသို့မဟုတ်ဇနီးမည်ပေးရဖို့ပျော်ရွှင်ချင်သင်သည်အဘယ်သို့သည့်အခါ၊သငျသညျခငျြနှင့်အသင်မည်သို့လိုချင်တယ်။ ကျွန်တော်ပြောမယ်-ဒါကြောင့်တစ်ဦးအားကြီးလာမှခံစားချက်နေအိမ်မှအမျိုးသမီးတစ်ဦးလိုသူဘာမှမထက်ပိုကောင်းဖို့ပျော်ရွှင်စေ။ ရင္ဒါမ်ဳိးေတြအရင္တုန္းက၊ငါသည်သင်တို့ကိုတိုက်တွန်းသွားရန်ဖိလစ်ပိုင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသကဲ့သို့-အထူးသဖြင့်ကြောင့်ကြရမည်မှန်သည့်အခါသင့်ရဲ့နိုင်ငံများအအအအဝလွန်မှုနှုန်းကဲ့သို့အင်္ဂလန်၊အမေရိကနှင့်ဥရောပနိုင်ငံများမှာမတွေအများကြီးနဲ့တူတယ်။ ရလဒ်အနေနှင့်၊သင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်ရှိမယ့်လမ်းပိုမိုပါးလွှာကျစ်လျစ်သေးသွယ်အမျိုးသမီးများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်အချိန်၌အနောက်နိုင်ငံ။ သင်တို့သည်အလွ အားဖြင့်ဂုဏ်အသရေ၏ဒေသခံအမျိုးသမီး။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုသဘာဝအတိုင်းမွာင္ၿသား၊မှောင်မိုက်တဲ့ဆံပင်အနက်ရောင်မျက်စိအောင်သူတို့ကိုထူးခြားဆန်းပြားနှင့်အႀကိဳအရှိန်အဟုန်များစွာအတွက်။ အ ယင်း၊ဒါဟာအတွေးတစ်ခု၏အသွင်သဏ္ဌာန် သောလူတန်းစားအလမ်းအတွက် ။ ဒါကြောင့်အတူ၊အမျိုးသမီးအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊အဘယ်အရာကိုသင်ရတဲ့င်အနေနဲ့အားကစားခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစား၊အလွန်ကြီးစွာသောသဘောမျိုး၏စတိုင်နှင့်အစွန်းရောက် ဖြူများအတွက်အမျိုးသားများမှကျေးဇူးတင်စကားနှင့်အတူလူအ”နီစိတ်”ရိပ်မိသူတို့တိုင်းပြည်၊ကိုယ့်ကိုယ်အဖြစ်၊ယုတ်ညံ့သောလူလာက္ျ။ အများစုဟာ၊အားလုံးမဟုတ်လျှင်၏ဒေသခံအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုလျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုအောင်မြင်ထက် ။ ဒါဟာညီမျှဖြစ်ခြင်း၏တစ်ဦးသန်းကြွယ်သို့မဟုတ်အရေးအတွက်အနောက်ကမ္ဘာအတွက်၊အမျိုးသမီးမွာနှင့်တွန်းဒေသခံအမျိုးသားများထွက်လမ်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းရသင့်အာရုံစိုက်။ အတိတ်အတွက်၊ဖိလစ်ပိုင်ခဲ့ကြတဲ့စပိန်ကိုလိုနီ-သို့သော်ယနေ့အချိန်တွင်၊ဗမာဒုတိယအမျိုးသားဘာသာစကား၊နှင့်တည်းမှာသင်ကျောင်း။ လုပ်ဖို့အရာတစ်ခုခုနှင့်အတူအမေရိကန်ပြီးနောက်အလုပ္အကိုင္ ။ ဒါဟာစတဲ့ဘာသာစကားတွေအများကြီးလူငယ် ရုပ်ရှင်များကြည့်၊သီချင်းနားထောင်ပြီးဖတ်စာအုပ်။ အဓိပ္ပာယ်သူတို့ဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်စကားအပြောမျိုးသမီးများ၏အားလုံးအတွက်အာရှ၊ခွင့်ပြုသောစစ်မှန်သောအဘို့၊အဓိပ္ပါယ်ရှိသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရနိုင်ဘယ်နေရာမှာမဆို။ ခြင်းရှိမရှိသင်တို့အဘို့အရှာနေဖြောင့်-တက်လိင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကျူးလွန်ဆက်ဆံရေး၊သင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သဘောတူဤတစ်ကောင်းသောအရာတစုံတခု။ တူတကွကအားလုံးကိုထားနှင့်၊သင်အမှန်တကယ်မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံတွေ့ဆုံသည့်အခါဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး။ သူတစ်ဦးမှကျေးဇူးတင်စကား၊ဖိလစ်ပိုင်’တိုင္းရင္းသားေလာေတြးေတာအရသာအရောင်အဆင်းနဲ့ပုံစံမျိုးလဲ? အမှန်တရားပြောလိမ့်၊ဤပရဒိသုသည်လူအဘို့အချစ်သောသူအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အဘို့အရှာဖွေနေတစုံတယောက်သောသူသည်အထူးအမျိုးသမီးများနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်နှင့်နိုးသူနှင့်အထိုက်။ မထင်ထိုက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်းသင်ပျော်ရွှင်စေသည်-စားသောသူတယောက် လိင်ပေးသည်၊သင်သဘောထားနှင့်ဘယ်တော့မှမဖော်ပြမဆိုကျေးဇူးတင်။ သင်ပြုလျှင်၊သငျသညျခငျြပါလိမ့်မယ်မှရယူရန်ငါ့အီးမေးလ်သင်တန်းသင်ပြပါလိမ့်မယ်အတိအကျဘယ်လောက်မှတွေ့ဆုံရန်နှင့်ဆွဲဆောင်တစ်အတွက်ရိုးရှင်းသောအဆင့်။ ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့သင်ယုံကြည်မည်မဟုတ်၊မပင်ရှိသည်ဖြစ်ဖို့အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအလားအလာရက်စွဲများမှကမ်ဘာပျေါတှငျဘယ်နေရာမှာမဆို။ ချစ်ချင်ပါတယ်၊သင်သိရန်လျှို့ဝှက်ချက်အကြံပေးချက်များနှင့်နည်းဗျူဟာငါဖွံ့ဖြိုးင့်အတွက်ငါ့အလိုရှိသမျှနှစ်များအတွက်ဒီမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။
ဖိလစ်ပိုင်လိင်ခရီးသွား သဘာဖိုရမ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဘုတ်အဖွဲ့- ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များမှသိကောင်းစရာများတုိက္ခုိက္မႈေဘယ်လိုချဉ်းကပ်ဖို့ဖိလစ်မိန်းကလေးများ
အောက်ကစာရင်းတစ်ခု၏ရေပန်းစား ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများအတွက်စုံလင်ပါဘူးရှာကြံရှာဖို့လှပသောမိန်းကလေးထံမှဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်အာရှနှင့်ချိန်းတွေ့အဖော်နှင့်ဖြစ်ကောင်းပင်ခရီးသွားလမ်းညွှန်အတွင်းသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ ဤအရာအားလုံးကိုဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဖြစ်ကြောင်းအခမဲ့တက်လက်မှတ်ထိုးပြီးတဆင့်ရှာဖွေကြည့်ရှုအားလုံးအတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့တိုင်းတည်နေရာသို့မဟုတ်ပြည်နယ်တစ်လျှောက်လုံးအလံကိုပါပေးစွမ်းဖို့မြေပြင်အလုပ်အဘို့အပေါင်းအဘော်သွားနေတယ်ဆိုရင်သင်မျိုးစုံလုပ်ဖို့သင့်ရဲ့နေထိုင်စဉ်အတွင်းဖိလစ်ပိုင်တွင်။ တဦးတည်းကြိုးစားနေ့နှင့်တွေ့ဆုံရန်အ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်အရက်စွဲသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုယနေ့။ ဖိလစ်ပိုင်စွဲအတူတင်ဆောင်ချည်ထံမှ တုိက္ခုိက္မႈေအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ပေးခြင်းသင်ပထမဦးဆုံးလက်အပေါ်အကြံဉာဏ်ဘယ်လိုချဉ်းကပ်ဖို့။ ဤအများအပြား ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဖြစ်ကြောင်းအပြည့်အဝကိုလိမ်လည်သို့မဟုတ်ပင်ဂိုဏ်း၏လိမ်လည်ဖို့ကြိုးစားပေးပို့ဖို့သင်ပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အခြားအခြေအသုံးပြုနိုင်ရန်ထုတ်ယူငွေမှအတွေ့အကြုံ။ ဖိလစ်ပိုင်စွဲဂွ္အဲဒီလိမ်လည်အသေးစိတ်အတွက်နဲ့ပေးသင်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ကိုမည်သို့အပေါ်မည်သည့်ပြဿနာမျှကိုရှောင်ကြဉ်ကူညီပေးနေသင်အသုံးပြု ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသင့်ရဲ့အားသာချက်မှမဆန့်ကျင်။ ပဲဖတ်ရန်နေ့စွဲသင်တို့နှင့်အတူအကယနေ့။ မီလှန်လှောကြည့်ရှုဤ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊အလွန်မြင့်မားအကြံပြုပူးပေါင်းဖိလစ်ပိုင်စွဲအတွင်းအရောက်တွင်ဖိလစ်ပိုင်။ ဤသင်အားငါပေးမည်အသိပညာလိုအပ်တဲ့သင်ကူညီပေးဖို့အကောင်းဆုံးအမြင်စွာသွားလာ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အများဆုံးထွက်၏။ လှောနိုင်တယ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ ချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်းမှအာရှမိန်းကလေးငယ်များအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအတူအကြံပြုအလံလင့်များအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ ရှာဖွေ အိပ်မက်ရက်စွဲစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအွန်လိုင်းယနေ့ငါတို့နှင့်အတူကြီးထွားလာ စာရင်းဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ။ ဖြစ်ပူးပေါင်းဖို့သေချာဖိလစ်ပိုင်စွဲပထမဦးဆုံးအကြောင်းသင်ယူရန်အလားအလာအန္တရာယ်များအစည်းအဝေး၏အမှား မိန်းကလေးနိုငျသောအတူသင်၏ခရီးစဉ်သို့မဟုတ်တောင်မှပိုဆိုး၊ဖျက်ဆီး၏။ ရာပေါင်းများစွာ၏ချည်နှင့်ပတ်သက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူ မိန်းကလေးများဆွေးနွေးကြသည်နေ့စဉ်သင်ပေးခြင်းထူးခြားတဲ့ကျွမ်းထိုးထွင်းထံမှယောက်ျားတွေလိုပဲအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ဖိလစ်ပိုင်စွဲအင်္ဂါတစ်ပိုင်းဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့ယောက်ျားတွေအစည်းအဝေး မိန်းကလေးများအဘို့အလားအလာအစည်းအဝေးတဲ့ခရီးလမ်းညွှန်သို့မဟုတ်အဖော်အွန်လိုင်းရှေ့တော်၌မိမိတို့ခရီးကိုအပိုင္။ သင်တွေ့လိမ့်မည်ထောင်ပေါင်းများစွာယောက်ျားတွေနှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံနှင့်အွန်လိုင်းပထမဦးဆုံးလက်အတွေ့ဆုံခဲ့နှင့်အတူ ထံမှမိန်းကလေးငယ်အားလုံးလူကြိုက်အများဆုံး ချိန်းတွေ့တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ၊၊ နှင့်အခြားလူမှုရေးကွန်ယက်အဖွဲ့ပလက်ဖောင်းများမှထူးခြားသောအပိုင္သာ။ သေချာဖြစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်းကိုကြည့်ရှုဖို့ဘာကခန့်စကားပြောလျက်ရှိသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏စာသားအရှိပါသည်မြင်မှသိကောင်းစရာများကျွမ်းကျင်သူများကကိုအသုံးပြုရန်မည်သို့တူဆိုဒ်များ
အဖွဲ့ဝင်များသောချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်အမှန်တကယ် နှင့်မှုတ်သွင်းကြည့်ဖို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်များအတွက်စံပြဖိလစ်ပိုင်ပွဲနေ့။ အမှန်တကယ် ကျယ်ပြန့်လူသိများအကောင်းဆုံးတစ်ဦးအဖြစ်ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့ကြပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်လူနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုလောကအတွက်အထူးသဖြင့်ဖိလစ်ပိုင်နှင့်အတူအကူအညီငါတို့၏အင်္ဂါမှသာဖန်ဆင်းနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အတူနည္းပညာ၏ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံအတွက်ပျော်စရာနှင့်အများကြီးပိုဘေးကင်းသည်။ အဖွဲ့ဝင်များသောချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်အမှန်တကယ် နှင့်မှုတ်သွင်းကြည့်ဖို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်များအတွက်စံပြဖိလစ်ပိုင်ပွဲနေ့။ ‘တွေ့အသီးအသီးအခြားအပေါ်ဒီဆိုဒ်ကိုပြန်ဖို့လမ်း။ ငါဖြစ်ဘယ်တော့မှမနိုင်ရန်အတွက်အကျေးဇူးတင်အမှန်တကယ် ဆောင်ခဲ့များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအတူတကွ။ ငါသည်အမြင့်မားဖို့အထူးအကြံပြုလို။ ငါ့စေ့စပ်နှင့်တွေ့ဆုံအပေါ်အမှန်တကယ် ။ ကျွန်မကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်ဆိုက်သို့ဆောင်ခဲ့များအတွက်ငါ့ကိုဘာတူတူ။ ယခုကျနော်တို့အတူတကွပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်။ ‘
ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့အခမဲ့ဖိလစ်ပိုင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းနှင့်ရှာအွန်လိုင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊အရေးယူဖို့ကြိုးစား။ များစွာသောဖိလစ်ပိုင်တစ်ဦးတစ်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ရှာကြံကြေနှင့် သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာယနေ့။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့။ တွေ့ဆုံရန်ဖိလစ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ တွေ့ပြီးစကားပြောနှင့်အတူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ တွေ့ဆုံရန်ဖိလစ်ပီနိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်အခမဲ့နေ့။ ပျော်စရာရှိသည်။ ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့အခမဲ့ဖိလစ်ပိုင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုတည်းနှင့်ရှာအွန်လိုင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊အရေးယူဖို့ကြိုးစား။ များစွာသောဖိလစ်ပိုင်တစ်ဦးတစ်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ရှာကြံကြေနှင့် သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာယနေ့။ ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့။ တွေ့ဆုံရန်ဖိလစ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ တွေ့ပြီးစကားပြောနှင့်အတူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ တွေ့ဆုံရန်ဖိလစ်ပီနိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်အခမဲ့နေ့။ ပျော်စရာရှိသည်။ ရေးအချို့စကားသည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းသင်လိုချင်တာလူတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံရန်(ဟောင်း:အဘို့အရှာဖွေနေတစ်ခုတည်းအကြေ၊တွေ့ဆုံရန်ချင်တစ်မျိုးသမီးများ၊စသည်တို့ကို။)မင်္ဂလာပါလူတိုင်း၊ငါသည်ငါ့စာန်ငါ၏စံပြလူနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်သည်စွန့်စားခြင်း၊ကောင်းသောရှာဖွေနေနှစ်ဦးစလုံးအတွင်းအပြင်နှင့်ပြင်ပ၊အရပ်ရှည်ရှည်။ ငါအလွန်ရယ်စရာ၊ရိုးသားအန်းဖြောင့်ရှေ့ကို၊အလွန်သစ္စာရှိမိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်တစ်ဦးကအဖြစ် ။ ကျွန်မဟာရှာကြံသောသူတစ်ဦးအမေရိကန်မိန်းကလေးချင်တယ်လက်ထပ်ဖို့တစ်ခုကြေလူ။ ရိုးရှင်း၊ စောင့်ရှောက်၊ပျော့ပျောင်း-နှလုံး၊ရင်းမှန်၊အနိုင်ဘာမှလုပ်အားလုံးကိုမေတ္တာအကြောင်း။ ငါဟာလူရိုး၊ဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊မေတ္တာရှင်၊ပျော့ပျောင်း-နှလုံး၊နိုင်ဘာမှလုပ်အားလုံးကိုမေတ္တာအကြောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြောမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားသူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ ငါလှပသော၊အသိဉာဏ်ဖြင့်၊အထိခိုက်မခံ၊ရင်းမှန်၊အကြင်နာ၊မေတ္တာ၊ဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊အသည်းအသန်၊ချစ်ခင်သော၊ပွင့်လင်းသောစိတ်နှင့်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးကောင်းနှင့်အပြုသဘောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူကောင်းသောသဘောဟာသက။ ငါအမှန်တကယ်နားထောင်ခြင်းပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ကစားခြင်းအကြှနျုပျ၏အကြိုက်ဆုံးပါ မိန်းကလေးမွေးမိခင်နှင့်ကချင်မှဆင်းအခြေချရန်အလေးအနက်လူယောက်ျားနှင့်မချိုး။ ငါ၏စံပြမိတ်ဖက်ဖြစ်နိုင်တစ်တာဝန်ရှိသည်ယောက်ျားကိုနားလည်ရန်လုံလောက်သောရင့်ကျက်နှင့်အတူရှိငါ၏ခင်ပွန်း။ ငါတစ်ခုတည်းနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမလေးတွေနှင့်အလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်အမျိုးသမီး။ ငါသည်လည်း-ဖော်ရွေ -မျိုး-စောင့်ရှောက် – နံနက်ကောင်းတစ်နားထောင်ကြောင်းသိသောနှလုံးတစ်ပါး၏။ ငါပိုကောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဘယ်လိုအကြောင်းမေတ္တာတစ်ဦးကလူကို။ လူတိုင်းတစ်အတိတ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုရုံသို့ပြောင်းရွှေ့ဖိလစ်ပိုင်နှင့်ရှာဖွေနေအတွက်ချစ်စရာ ရည်းစား။ ငါ၏စောင့်ရှောက်မှုယူသင့်ပိုက်ဆံပြဿနာလျှင်သင်၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လူငယ်တော်တော်နှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုး၏မိန်းကလေး။ ပြဿနာမရှိပါဘူးသင်ချင်တယ်ဆိုရင်။ အိုးႏွတာပါ ကျွန်မဟာရှာကြံကလူအဘို့။ ကျပံ့နိုငျကွောငျးကိုအကြှနျုပျကိုအထူးသဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးကျွန်တော်ကကျောင်းသားနဲ့နောက်ပြီးကျွန်မလေ့လာစေချင်တယ်၊အစိုးရလူ။ ငါအကြင်နာမေတ္တာနှင့်နားလည်မှုအကြားကလေး။ ရယ်ရွှင်လန်းမယ်ဒါပေမယ့်နည်းနည်းရှက်။ သင်မူကားသွားခံစားဖို့ငါ့ကိုအဖို့ပြောနေတာ။ ရိုးရှင်းပြီးရှာနေ၊ချစ်စရာကောင်းတဲ့၊ပျော့ပျောင်းဘာသာစကားမ်ားကိုေျပာဆိုသည္၊မိသားစုပိုင္စီး၊ဘုရားကြောက်ရွံ့သောမိန်းမ။ သောတစ်ခုတည်းသောအရာငါသည်ပူဇော်အမှန်စစ်မှန်သောအချစ်။ သူအမျိုးသမီးမရွေးရှိမရှိသင်အပိုင်အခြားလူမျိုးသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှု။ အဘယ်သို့ငါအမှန်တကယ်ရှာဖွေနေဒီမှာအမျိုးသမီးမည်သူငါ့ကိုချစ်မည်သို့ပင်အခြေအနေအတွက်အသက်ကိုကျွန်တော်ခွဲအတူအသုံးလေးတွေ။ အဘယ်အရာကိုသင်မြင်သည်အဘယ်သို့ရ။ ကျွန်တော်ကသူပြောလိမ့်မယ်ဘာ၌ငါ့စိတ်နှလုံးသည်ငါမဟုတ်ဟန်ဆောင်ငါအိုကေဆိုရင်ကျွန်မမရယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးမေတ္တာနှင့်ဂရုစိုက်လူတစ်ဦး။ တောင်မှကျွန်မလည်းအများအပြားနာကျင်မှုနှင့်ကြေငါနေဆဲအတွက်ယုံကြည်ချစ်၊ငါသည် ဆဲယုံကြည် နှင့်ပျော်ရွှင်သောအဆုံးသတ်ရေး။ ရှာသည်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှာဖွေနေမိန်းမအဘို့အကြှနျုပျ၏အသက်တာ၏ကျန်သုံးဖြုန်းရန်ငါ့အသက်ကိုနှင့်အတူ။ ငါရှာဖွေနေအမျိုးသမီးနှင့်အတူနှလုံး၏။ ငါမုန်းအိပ်စေချင်တယ်၊အမျိုးသမီးတစ်ဦးကကျွန်မယုံကြည်စိတ်ချနိုင်။ ကျွန်တော်ဂိမ်းကစားချစ်တွေအများကြီး။ ငါစိတ်ရင်းမှန်နှင့်စစ်မှန်သောလူဖြစ်ကြောင်းကိုမေတ္တာ၊ဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊နှိမ့်ချဖို့၊ကမ္ဘာမြေနှင့်အတူဥာဏ်ကောင်းသောဟာသ၊ရိုးသားသော၊စိတ်ရင်းမှန်၊အပြုသဘောအဖြစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ငါဟာအလွန်မိသားစုပိုင္စီးနှင့်အတူတစ်ဦးအားကြီးသောသဘောမျိုး၏။ ငါရှာနေတာပါအတွက်အလေးအနက်နှင့်စစ်မှန်ဆက်ဆံရေးလိမ့်မည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ ငါချစ်။။။ ဖြုန်း၊ငါ့အားလပ်ချိန်စာဖတ်ခြင်းခမင်္ဂလာပါငါ၏အ ပဲငါ့ကိုဖုန္းေခၚဗက်ဟောင်းကနေ စီးတီးချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပိုမိုသိရန်အဘယ်သူသည်ငါဖြစ်၏ရုံပေးပို့ခြင်းငါ့ကိုအသတင်းစကားပေါ်။ ငါသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကျွန်တော်ဟာလူငယ်နှစ်ဆယ်နှစ်အရွယ်အဘို့အရှာဖွေနေလှပသောအမျိုးသမီးများအတွက်ချစ်ကြည်လျှင်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးငါသိကျွမ်းဖို့ကိုချစ်သင်ရှက်ဖြစ်မနေပါနဲ့မကိုက်။ အဘို့အရှာဖွေနေတစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြရန်ပုံမှန်အပေါ်အခြေခံ။ လျှင်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ငါရယ်ဖိလစ်ပိုင်၊အဘို့အရှာဖွေနေတစ်ခုတည်း မင်းသမီး၊အပေါင်းအဘော်နှင့်မိတ်ဖက်အသက်တာ၌။ ကျွန်တော်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချလူရွာေသာအချစ်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အတူငါ့အနာဂတ်သူများ။ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မည်သူမကြာ။ ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့:ဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့လုံးဝအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ဒီဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ချိန်းတွေ့ဖို့တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ များစွာသောဖိလစ်ပိုင်တစ်ဦးတစ်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်ကိုတွေ့အွန်လိုင်း။ ချိန်းတွေ့အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ဖိလစ်ပိုင်မှာချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုပူးပေါင်းတဦးတည်းအကြားဝက်ဘ်ဆိုက်၏အခြားအ ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသင်၏စုံလင်သောမေတ္တာပွဲ။ ရေးယူဖို့များအတွက်မှတ်ပုံတင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာနှင့်စတင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူဦးခ်င္းဖိလစ်ပိုင်အတွက်။
အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်ရှာဖို့အတွက်မေတ္တာပြည်ပ။ အချို့တို့သည်ငြီးငွေ့၏ဆက်ဆံရေးအတွက်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုနိုင်ငံ၊အခြားသူများနှင့်အတူမသက်မသာခံစားရပါမိမိတို့ဇာတိယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဒေသခံအစဉ်အလာ၊သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲချင်တော့သူတို့နည်းအတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးမေတ္တာ။ ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကပြုလုပ်ဘဝအသက်တာအတွက်အခြားတိုင်းပြည်အဖြစ်၊ငါခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ၊ငါနေထိုင်မှုအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ဒီနိုင်ငံနှင့်၎င်းတို့၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်မိန်းကလေးများ။ ဒီဖိလစ်ပိုင်မိန်းကလေးရဲ့လမ်းညွှန်၊ကျနော်တို့မှာကြည့်ရှုမည်နည်းရှာဖွေရန်မိန်းကလေးမှအပိုင္၊အားလုံးကိုကျော်လွှားအတားအဆီးဆက်သွယ်ရေးအတွက်၊နှင့်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောရှာဖွေမိတ်ဖက်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်များနှင့်အိပ်မက်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမိန်းကလေးများအမှန်ကိုစဉ်းစားအများဆုံးဆွဲဆောင်မှုအရှေ့အမျိုးသမီး။ ခံရပူနွေးခြင်းနှင့်နေသာသဘာဝတွင်၊သူတို့အမှန်တကယ်တူရောက်လာကြသူငြီးငွေ့၏ ဆက်ဆံရေးအတွက်နှင့်စီးပွားရေးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက်လက္ခဏာများဥရောပသို့မဟုတ်အမေရိကန်။ အားလုံး လူ၏ဖိလစ်ပိုင်များအလွန် ၊သောအတည်ပြုခြင်းအားဖြင့်နွေးထွေးသောအဖေ့ဆီသို့ဦးတည်င္ငံျခားသားမ်ား။ မည်သို့ပင်အခြေအနေ၊မိသားစုသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ၊ဖိလစ်ပိုင်မိန်းကလေးငှါဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်သင်နှင့်သင်နွေးထွေးသောကြိုဆိုပေးစေ။ သူတို့ပွင့်လင်းများဖြစ်ကြရန်မလွယ်ကူ၊နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုမကြောက်နှင့်ဆက်သွယ်င္ငံျခားသားမ်ား။ တိုင်းပြည်အတွက်ချားလ်စ်ကမ်းခြေနှင့်အပူပိုင်းအပန်းဖြေအများအပြားဧည့်သည်များနေချင်ရှေးကာလ၌၊ အားဖြင့်ဖိလစ်မိန်းကလေးများနှင့်စိတ်ဝင်စားသူတို့၏ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်ခိုင်ခံ့သောမိသားစုကိုတန်ဖိုး။ အများအပြားရှိပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ၊အခွင့်အရာတစ်ကယ်လုပ်ခြားနားချက်မှအားလုံးအခြားအမျိုးသမီး။ ငါနှစ်ဦးစလုံးအောင်မြင်သောအတွေ့အကြုံနှင့်နည်းစဉ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ခြင်း။ ဤအချိန်အတွက်အဆုံးစွန်သောလမ်းညွှန်ချက်အ အမျိုးသမီးငါဒီအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ။ အစွမ်းထက်တဲ့မိသားစုရဲ့အရည်အသွေးအဖေ့သင့်စေမယုံကြည်သောသူတို့အကောင်းကိုသာအဘို့ဖန်တီး။ ဖိလစ်ပိုင်မိန်းကလေးများပွင့်လင်းများဖြစ်ကြပြီးလူပေါင်းကောင်းသော၊အလွယ်တကူရနိုင်ကျွမ်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ဆက်ဆံရေးကို၊ပင်ပေမဲ့ကက်သလစ်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်အလေးအနက်သဘောထားဖို့မိသားစုဘဝ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအပန်းဖြေ၊ႏိုင္ငံျခားမွာကဒီဧရိယာ၌။ အများစုကနိုင်ငံခြားသားလာမှာအားလပ်ရက်အပေါ်၊မိမိတို့အဘဝပုံစံကိုပြောင်းလဲပစ်၊သို့မဟုတ်ပြီးနောက်အငြိမ်းစား။ ဒေသခံပြည်သူများလေ့ရှိပြီးထိုကဲ့သို့သောလူတို့နှင့်အလွန်ကောင်းတဲ့အများမှာ။ သမိုင်းကြောင်းအ၊နိုင်ငံခြားမှာဖြစ်ကြောင်းလေးစားဖွယ်နှင့်အလွန်အမင်းတန်ဖိုး၊သူတို့အတော်လေးတူဇဝငျရှိပါတယ်၊ဒါကြောင့်အတော်လေးလွယ်ကူဖို့ခင်မင်သိကျွမ်းရမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ။ ခြားနားချက်များအတွက်အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားအဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်သဘောထား၏အခြားသူများအားသူတို့အမှန်တကယ်ဒီမိုကတွက်သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝ။ လျှင်သင်အံ့သြဖို့ဘယ်လိုရှာတွေ့ရိုးသားတဲ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်ရနိုင်ကျွမ်းနှင့်အတူတစ်ခုတည်းဖိလစ်ပိုင်မိန်းကလေးနီးပါးနေရာတိုင်းတွင်စျေးဆိုင်များ၊ဟိုတယ်များ၊ကဖေး။ ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြောကလပ်အသင်းရှာဖို့အတွက်မိန်းကလေးတစ်ဦးအလံဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောနှင့်အတူရိုးသားသင်ခက်ခဲသည်၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤသည်ကက်သလစ်နိုင်ငံနှင့်မိန်းကလေးအရေအတွက်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်း။ သူတို့အဘို့၊ဒါကြောင့်ပင်စင်ကြယ်သောကိုယောက်ျားနှင့် မီ၏၊အနိုင်အောင်ပင်ယူမိမိတို့အမိတ်ဆွေများနှင့်သူတို့နှင့်အတူအရက်စွဲများအပေါ်။ လျှင်သင်အဖိလစ်ပိုင်အဆင်သင့်သူသည်အလွယ်တကူချိုးဖျက်အားလုံးအစဉ်အလာများနှင့်အကောက်ခွန်၊နိုးနိုးကြားကြားရှိသောကြောင့်၊သူမအနိုင်စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောတဏှာ၏ပိုက်ဆံများအတွက်။ ရှိပါကမည်သည့်သံသယကသူမ၏ရိုးသားမှု၊နောက်။။။။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ကျနော်ဖြတ်ပြီးလာကြ၏အလှမိန်းကလေးများကိုယ့်အပေါ်အလမ်းများကိုရှာဖွေဖို့လွယ်ကူင်အသုံးဘာသာစကားနှင့်အတူသူတို့အဘို့အမေး။ လည်း၊သင်လုပ်နိုင်အနေဖြင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအွန်လိုင်းမလိုဘဲလျက်သွားမှဒီနိုင်ငံ။ သို့သော်၊အားလုံးမဟုတ်ဖိလစ်ပိုင်မိသားစုကွန်ပျူတာများရှိသည်ကြောင့်၊ဤသည်တရားမျှတစွာဆင်းရဲသားကိုပြည်နယ်။ အဆုံးစွန်သောလမ်းညွှန်ချက်ကိုဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှာတွေ့ဖို့အရာအားလုံးစတင်ရန်လိုအပ်ချုပ် ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ချိန်းတွေ့ဖို့တစ်ခုတည်း ၊စဉ်းစားနောက်အမှတ်တွက်အဆင်သင့်ရရန်အရေးသမိုင်းမှတ်တိုင်:တကယ်တော့၊ဖိလစ္ပိုင္အလွန်စိတ်ဝင်စားသူအတွက်နိုင်ငံခြားသားနှင့်အရာအားလုံးနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာ။ နီးပါးမိသားစုတိုင်းအိပ်မက်တွေရှိခြင်း၏အခင်ပွန်းဒါမှမဟုတ်ရည်းစားတစ်ဦး၏သမီးထံမှအခြားပို။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ။ အပြားပင်ရှိသည်မှိုင်းသောင္ငံျခားသားမ်ားကဒီမှာလာရန်သာလက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့မဟုတ်ပဲအတူဒေသခံမိန်းကလေးများ။ အများစုကယုံကြည်ကြောင်း တွေ့ဆုံရန်သူတို့နှင့်အတူသာ၏မျက်နှာကိုထောက်။ ငါ့အတွေ့အကြုံ၊ငါပြောလိမ့်မယ်အဲဒီအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်၊ဒါပေမယ့်မသမျှသောဤမိန်းကလေးများဖြစ်ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထမ်းဆောင်။ သူတို့သိဘယ်လိုပျော်မွေ့ရန်ရိုးရှင်းသောအရာ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အထင်ကြီး၊သူတို့ကိုချိုးဖျက်မှိုင်း။ သူတို့ကိုပြသအခြားအဘယ်အတွက်သူတို့၏ယဉ်ကျေးမှု၊သူတို့တိုင်းပြည်၊နှင့်မိန်းကလေးများကိုယ်နိုင်အားဖြင့်ကြိုက်င္ငံျခားသားမ်ား။ ပြောသူတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်သူတို့သည်ဤမျှလောက်ထူးခြားသော။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊ဒီတိုင်းပြည်တစ်ပြည်၏အရောင်အဆင်း၊ချမ်းသာ၊နှင့်မယ့်တစ်အပန်းဖြေစခန်းများအတွက်အငြိမ်းစားမှဥရောပသို့မဟုတ်ကြွယ်ဝသော။ ထုတ်ရှာဖွေဘာဖိလစ်ပိုင်ကဲ့သို့အမျိုးသမီးအတွက်သူတို့ရဲ့အတိအကျဧရိယာနှင့်ဖြစ်စေတစ်ဦးအံ့အားသင့်။ လေးစားရိုးရှင်းသောအမှုအရာ၊စိတ်ရင်းမှန်ပြီးဖြစ်ပြီး၊သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်။ အာရှမိန်းကလေးများအတော်လေးရေပန်းစားအကြားနိုင်ငံခြားသားတွေကြောင့်သူတို့၏ထူးခြားသောအလှအပ၊ကျက်သရေ၊နှင့်ခိုင်ခံ့သောမိသားစုကိုအစဉ်အလာ။ နှိုင်းယှဉ်ပါကအမေရိကန်သို့မဟုတ်ဥရောပတိုက်ရဲ့အရွယ်အမျိုးသမီးများပိုမိုပေါ်အာရုံစူးစိုက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့် ဆက်ဆံရေးအတွက်၊အာရှမိန်းကလေးများဖြစ်ဟန်မှန်ကန်ကျက်၏မိသားစုအဖိုနှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့မိခင်။ ထို့အပြင်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်ရူးပြားင္ငံျခားသားမ်ား။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိုလျှင်၊ငါနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်ရှိပါတယ်၊အဖြစ်အများအပြားပြဿနာတွေအတွက်ဆက်သွယ်ရေးအဖြစ်ကြောင့်ထင်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုအကြံပြုချက်ငါကွပ်နှင့်အစစ်အမှန်အသင်။ ဒါကလုံလောက်တဲ့ခံရဖို့အရေးသူတို့မျက်စိထဲမှာ။
လာလျှင်သင်အဘူသာအတြက္ခရီးအနီးအနားရှိကမ်းခြေသို့မဟုတ် ဥယျာဉ်၊ဒါပေမယ့်လည်းပျော်မွေ့နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချို့သောကောင်းတဲ့ ၊ထို့နောက်သင်ဖြစ်ကောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးအတူမေးခွန်းနှင့်ငါပြုသောအခါကျနော်ပထမဦးဆုံးဒီမှာလွန်ခဲ့သည့်လေးနှစ်:အဘူအမှုသည်ငါ့အကြိုက်ဆုံးစီးတီးဖိလစ်ပိုင်မှာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးအများကြီးပေးဆောင်ရွေးချယ်မှုများနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လွယ်ကူမှုများရှိခဲ့ပါတယ်ခံရဖို့။ အခြားစကားများတွင်:သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အပြည့်အဝအကွာအဝေး အတွက်အနီရောင်အလင်းဒေသများ၊အထူးသဖြင့်ရက်ထပ်နှင့်ပတ်ပတ်လည်များ၊နှင့်ပင်ပိုကောင်း:ဆိုရင် ဆပ်ဖို့မလိုကြဘူးလိင်များအတွက်နေ့တိုင်းနှင့်အချိန်တိုင်း၊သင်အမှန်တကယ်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်နိုင်ပဲကျင်လမ်းလျှောက်ဈေးဝယ်နှင့်မိန်းကလေးများတွေ့ဆုံရန်အခမဲ့(ပါကသင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိကြောင်း၊စာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လက်)။ သို့မဟုတ်ပင်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းထက်:သင်တက်လက်မှတ်ထိုးအပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်စီစဉ်ညစာရက်စွဲများအဆင်ပြေနေဖြင့်သင့်ရဲ့ဟိုတယ်အခန်းကြည့်နေစဉ်ရုပ်ရှင်နှင့်သောက်သုံးခြင်းအအေးအာင္ဆန္း (သို့မဟုတ်ပွီခင်မှာပင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်)။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်ဘူချင်ကြဘူးသောသူသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံ၊ထိုအခါချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသွားကြဖို့လမ်းဖြစ်၏။ နှစ်ခုအအကြီးမားဆုံးဆိုဒ်များနှင့်အတူကပ်ဖို့တစ်သန်းတက်ကြွစွာအဖွဲ့ဝင်များအသီးအသီးဖြစ်ကြ မေတ္တာနှင့်ဖိလစ်ပိုင်ကင္ယာ။ အဘယ်သူမျှမပိုကောင်းတဲ့နေရာအတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်အထက်ဘူ။ ကောင်းပြီ၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနီလာပြီပင်ပြီးမိန်းကလေး၊ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာသာဘူဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောပေါင်းစပ်ရေမိန်းကလေးများနှင့်အဆင်ပြေစေရန်နှင့်အစည်းအဝေးကော်ဖီအဘို့ထိုသူတို့ကိုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်အတွက်ပပါ။ မနီလာရှိသင်မယ်လို့များသောအားဖြင့်ထိုင်အတွက်တက္ကစီများအတွက်ဝက်တစ်နာရီသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပို။၊ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာသင်ရုံမှလမ်းလျှောက်အရှိဆုံးနေရာ၊သို့မဟုတ်ပဲယူ အငှားများအတွက်လိုငါးဆယ်မိနစ်။ မိန်းကလေးများ၏အများစုဟာအပေါ် မေတ္တာနှင့်ကင္ယာများပုံမှန်နေ့လုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ားသို့မဟုတ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်အဘို့သင်တို့မေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပိုက်ဆံအဘို့မိမိတို့အအ”နည်းနည်းပြဿနာများကို”ကဲ့သို့အလွတ်သင်တွေ့ဆုံရန်အတွက်ကလပ်အသင်း(အောက်တွင်ကြည့်ပါ)။ သို့သော်သင်တန်း၊သင်လိုချင်တာအပေါင်းတို့သည်အချိန်းတွေ့အစိတ်အပိုင်း၊ထိုအခါသင်သည်လည်းအစက်အပြောက်အချို့ သူမှလာကြလိမ့်မည်သင်၏ဟိုတယ်အခန်းအတွက်တစ်ထောင်ကိုဆက်လက်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမမေးသောမေးခွန်းများ(သို့သော်အချို့ပင်”သာမန်”မိန်းကလေးများမရကြဘူး၊ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့များမှာစူးစမ်းဖို့ထွက်ဆွဲထားနှင့်အတူနိုင်ငံခြားနှင့်ရန်ပိုနှစ်သက်မမြင်အများပြည်သူအတွက်ကြောင့်သူတို့အရှက်နှင့်စားရန်သဘောတူပုဂ္ဂလိကပိုင်”ရုပ်ရှင်ကြည့်”သင့်ရဲ့အခန်း၌)။ နောက်ထပ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နေရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့များအတွက်မိန်းကလေးငယ်များလိင်သာဘူများမှာဈေးဝယ်။ ငါပြီးသားရေးထားပြီတဲ့သီးခြားလမ်းညွှန်အပေါ်အကောင်းဆုံးအဝယ်နှင့်အတူမိန်းကလေးများအတွက်ဘူရာ ၊ မြို့၏အဘူနှင့် ကမ်းခြေ။ နှင့်အတူပယ်စတင် ဟိုမှာကညနေခင်း။ သြားဘိုရဲ့ကော်ဖီကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ။ သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်အမြင်အနည်းငယ်အခြားနိုင်ငံခြားသားထိုင်သူအပြင်ဘက်အပေါ် လှပသောကျန်ကြွင်းသောအရပ်နှင့်အလားတူအစီအစဉ်တူ။ အမြဲတမ်းအများကြီးကောင်းတဲ့မိန်းကလေးလမ်းလျှောက်တိတ်သို့မဟုတ်ရပ်နေသွင်နှင့်ရှာဖွေနေယ့်ကိုပျင်း(သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်အတွက်ငါ့ရုပ်ပုံလွှာ)။ သို့မဟုတ်ကိုယ့်ပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်အဆိုင်အတွင်းအပြင်နှင့်စကားပြောမိန်းကလေးငယ်ရှိပါတယ်(သို့မဟုတ်သူတို့ကို၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းစက္ကူနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအရေအတွက်ကြောင့်၊အများအပြားသူတို့ကိုလည်းရှက်ဖို့ပြောနိုင်ငံခြားသားများ၏ရှေ့မှောက်၌သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများ)။ ရီထွက်သော်လည်း၊ကြောင့်အဝယ်များမှာလည်းလူကြိုက်အများဆုံးနေရာများအတွက်အလွတ်တန်းအပြည့်တန်ဆာကြည့်ဖို့ဖောက်သည်များအတွက်(နှင့်အတူညဥ့်အခါကလပ်အသင်း)။ နိုင်ကောင်းတစ်ဦးသဘောတူညီချက်၊အဖြစ်အများစုဟာသူတို့ကိုအသွားပါလိမ့်မယ်အချိန်တိုအတွက်၊သို့မဟုတ်၊ကိုဆက်လက်၊ဒါပေမယ့်သင်ကြိုက်တတ်တဲ့လျှင်လိင်ရှိသည်အခမဲ့အဘို့အ၊ထိုအခါချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံ။ အနှေးနဲ့အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်ရှိသည်ချင်တယ်တစ်ဦးအေးမြဘီယာ၊နှင့်အလျဉ်းအဆန်သူအရက်ဆိုင်များမှာအကောင်းဆုံးနေရာ။ မျိုးအစားသုံးမျိုးရှိပါတယ်ဆန်ကျင်:အမှောင်ဖျော်ယမကာ(အလားတူတူသွားသွားအရက်ဆိုင်များအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံ)၊အလင့်ခ်(လားတူတူအကေအရက်ဆိုင်သာထိုင္း)ႏွင့္အားကစားအရက်ဆိုင် (အလားတူတူဘီယာအရက်ဆိုင်များအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံ)။ ငါသည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုပါသည်သောအားကစား။ အဘယ်ကြောင့်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်အမြင်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးအရေကူးဝတ်စုံနဲ့အရက်ဆိုင်နှင့်လင့်ခ်များမှာအကြီးကြီးကိုက်ချွတ်(ကြင္းအချိုရည်သုံးရာကိုဆက်လက်အသီးအသီးနှင့်ဒဏ်ငွေအနည်းဆုံး၊ကိုဆက်လက်၊သာကွင်းရဲ့ပင်။)။ အကောင်းဆုံးအားကစားအရက်ဆိုင်ဘူတွင်တည်ရှိရက်ရိပ္သာ(မြေပုံရဲ့အဆုံးမှာလမ်းညွှန်)။ အကြှနျုပျ၏အကြိုက်ဆုံးအရက်ဆိုင်များမှာကြယ်အပေါင်းတို့က ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးရဲ့ပျော်စရာ၏လေထုနှင့်အတူရှိကြောင်းကိုစွဲနှင့်ဖျော်ဖြေ။ အမျိုးသမီးအချိုရည်သာကိုဆက်လက်၊နှင့်သင်တောင်မှမရှိဘားကောင်း၊သင်ယူနိုင်သူတို့ရဲ့နံပါတ်နှင့်အကြိုနေ့(သို့မဟုတ်ပဲအထိစောင့်ပြီးသူတို့အလုပ်လုပ်မှာပါ)။ ဖြစ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအဘို့အ ပိုက်ဆံရွေးချယ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ အလွတ်ပေါ်လမ်းနှင့်ပပါ။ မတူဘဲအတွက်အနီ၊အများစုဟာအဲဒီလမ္း ကြည့်အစားကြောက်စရာငါဘယ်တော့မှမယ်လို့တောင်ထင်ဆောင်ခဲ့၏တ၏မှသူတို့ကိုနောက်ကျောငါ့အခန္း၊ဒီဘူငါသည်သူတို့ကိုရှာတွေ့အများကြီးပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုလွယ်ကူသွားနှင့်ပျော်စရာ။ အပူအစက်အပြောက်အများစု၏ဤမှုမပါဘဲ။ ထွက်ဆွဲထားကြသည်ရက်ထပ်(အထူးသဖြင့်ပတ်ပတ်လည်အ မြန်အစားအစာစတိုးဆိုင်မှအကြောင်း-ညေန)၊ စင်တာ(အထူးသဖြင့်အပေါ်ကျန်ကြွင်းအပေါ်စီးနှင့်ကြမ်းပြင်မှအကြောင်း-နာရီ)။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတစ်ဦးကလပ်လူနေတယ်ဆိုရင်၊ထို့နောက်သင်တွေ့လိမ့်မည်အခွင့်အလမ်းများများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့များအတွက်မိန်းကလေးငယ်များလိင်ဆက်ဆံအတွက်အမျိုးမျိုးသောညဥ့်ကလပ်အတွက်ဘူ။ အနှစ်လူကြိုက်အများဆုံးကလပ်အသင်းများမှာဂျေ- နှင့်အသက်ရှင်နေထိုင်။ ဂျေ- စုစုပေါင်းဟွတ်ကလပ်မှမြင့်မားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အစဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်(ပုံ)တခုနဲ့တူပိုပြီးပုံမှန်ကလပ်၏စာရေးနှင့်အတူ”ပုံမှန်”မိန်းကလေးငယ်များ၊လွန်း။ မမျှော်လင့်သောအဖြစ်ဖို့လွယ်ကူနှင့်အတူသူတို့ကိုသော်လည်း၊ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးကဲ့သို့သင်တို့သူတို့ကိုမဝယ်တယောက်ကိုသောက်စရာပြီးတော့သူတို့ပူးပေါင်းသင်၏အခန်း(မဟုတ်လျှင်သူတို့ ၊နှင့်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်၊လွန်း)၊သင်မူကားရန်ရှိသည်လိမ့်မည်တီနှင့်အတူသူတို့ကိုအနည်းဆုံးအတွက်နာရီအနည်းငယ်ပြီးနောက်၊သူတို့အနည်းငယ်ယစ်မူး၊သူတို့ယုံကြည်စိတ်ချလောက်ထိုင်ရန်အတွက်တက္ကစီနှင့်အတူ။ ဘုရားအားလုံးအားကစားဘားတန်းပေါ်မကောင်းတဲ့ဤသည်နေ့ရက်ကာလ။ ဖက်စလုံးကိုအရုပ်ဆိုးဆိုင်ကယ်နှင့်ဖောက်သည်များ။ ငါသည်အမျှပရိတ်သတ်ဖြစ်ကြောင်းကို”မှကျွမ်းကျင်သူများအရက်ဆိုင်”စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ် နှင့်အများကြီးပိုပြီးဖော်ရွေရှိပါတယ်၊အသီးအသီးညဥ့်ဘဝဂီတ(အခါငါထိုင်နှင့်အတူငါ့ရည်းစားတစ်ဦးမိန်းမရေကူးဝတ်စုံ-အဲဒီတော့ဘော်ဒီရက်တွင်ဘူရန်အတွက်အူမ)၎င်း၏အကောင်းဆုံးနှင့်အတူလိုက်ရန်ရွေးချယ်မှု၏အနည်းဆုံးလေးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်သာပူးပေါင်းသုံးပတ်ထွက်မသွားမီသူတို့ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်အမြန်ရွေ့လျားအလိုရှိသောသူကောင်လေးအမှန်တကယ်ရောက်ရှိပထမဦးဆုံးအလွန်ခဲယဉ်းလိမ့်မည်ဟုသူတို့သည်မြော်လင့်ရေးမပါဘူး၊အဘယ်အရာကိုသင်အမှန်တကယ်ကဲ့သို့သောကြည့်ရှုနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ပိုက်ဆံရှိသည်နှင့်သူတို့ကိုကုသ။ ရှိလွင်ပြင်အဝတ်လုံခြုံရေးအတူအပြန်အသင်း၏ယခုမူကားသင်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကံကောင်းနှင့်အတူသစ်တစ်ခုမိန်းကလေးတစ်ယောက်အသစ်အမြင်ကွင်းတစ်ခုမဟုတ်ရင်သူတို့ကောင်းစွာအသုံးပြုကောင်းရဖို့ကသူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပယ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အလျှင်သူတို့ကပိုပြီးဖတ်ပါ”ဘယ်တော့မှသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးမဟုတ်လျှင်သင်ရှာဖွေနေဆက်ဆံဖို့နှစ်ဦးမိန်းကလေးငယ်များထဲကအရာအားလုံးကိုများအတွက်ပေးဆောင်သို့မဟုတ်အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦး၏အတွေ့အကြုံ။ (ငါအကြောင်းပြောနေတာပေါ့မိုက်)
ဖိလစ်ပိုင်မှာ၊ငယ်လေးတစ်နိုင်ငံ၏အသွင်သဏ္ဌာန်၌အဇောက်ထိုး”နှင့်”အရှေ့တောင်အာရှရှိ။ ငါမှပြောင်းရွှေ့နယူးယောက်အခါတဆယ်နှင့်အသည်းအသန်ကြိုးစားရှာဖွေဖို့တစ်ဦးအကြားချိန်ခွင်လျှာငါ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျွမ်းတဝင်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု။ ၏အစိတ်အပိုင်းကအမေရိကန် ပါဝင်သည်။ အများဆုံး (အမျိုးသမီး၏”ဖိလစ်ပိုင်”)၊ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့၊ကိုယ်အလေ့အထိစောင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်အစောပိုင်းမှစတင်ချိန်းတွေ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဲ့ပြီးပြီတူထမြောက်သောယုံကြည်ချက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုလေ့လာရေးပထမဦးဆုံးလာ။ (ကကူညီပေးခဲ့ကြောင်းတက်ရောက်အနေနဲ့အားလုံးမိန်းကလေးငယ်ကက်သလစ်အထက်တန်းကျောင်းတော့သိပ်မရှိခဲ့ဆောင်မှု။)ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့စတင်ချိန်းတွေ့ငါ့မ-ဖိလစ်ပိုင်ရည်းစား၊အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုသူလိုအသိတယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးလစ္ပိုင္မာနမိမိကိုယ်ကိုအပေါ်အနီးကပ်”မိသားစုဆက်ဆံရေး။”ဖိလစ်ပိုင်မိသားစုများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော၊အများဆုံးအာရှ မိသားစုများနှင့်အလွန်နီးကပ်။ လူတိုင်းကွင်းအတွက်မြှင့်ဖို့ကလေးတစ်ဦးမှအဘိုးအဘွားအ မှလာမယ့်တံခါးအိမ်နီးချင်း။ တကယ်တော့၊သမိုင်းကြောင်း၊ဖိလစ်ပိုင်ပိုးပန်းစည်းလေးလုပ်နေဝန်ဆောင်မှုအတွက်မိန်းကလေးရဲ့မိသားစု(ဆိုခ်က္မ်ားရေလို့အကျိုး၊စသည်တို့ကို။)အဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေများ၏ဆည်းဖို့သူမ၏နှင့်မိသားစု။ မိသားစုအရေးကြီးဆုံးအရာကျွန်တော်တို့ကိုပင်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပိုမိုကျွန်တော်တို့ကိုရန်အရေးထက်သာ။ (စိတ်မကောင်းပါ။)၊အဖြစ်အမွှေးအကြိုင်မိန်းကလေးပြောဖြစ်လိုလျှင်သင်သူမ၏ချစ်၊သင်ကရရန်နှင့်အတူသူမ၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု။ ဘယ်တော့မှအစဉ်၊အစဉ်အမြဲစော်မိသားစုဝင်တစ်ဦး။ ကျွန်တော်ဖေ့ကိုလည်းရှိ၏-“သင်ချင်တယ်ဆိုရင်တရားရုံးကမိန်းကလေးတစ်ဦး၊တရားရုံးအမိ။”ငါ့ကိုယုံကြည်။ ဒါဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်။ အဖြစ်မကြာမီငါဖြစ်လာဖို့လုံလောက်တဲ့ဟောင်း၊ကျွန်မအမေပြောတာက”ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူးဘာလူမ်ဳိးေသူဖြစ်ပါသည်၊နေသမျှကာလပတ်လုံးသူ၏ကက်သလစ်။”ဘာလို။လဲဆိုေကနေတစ်တင်းကျပ်နှင့်ရှေးရိုးစွဲရောမကက်သလစ်နိုင်ငံ၊အများဆုံး သင်အများဆုံးဖွယ်ရှိတွေ့ဆုံရန်စောင့်ကက်သလစ်အားလပ်ရက်တွင်တက်ကြွစွာဘုရား၊ဝတ်ဆင်ဘာသာရေးမယားတစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်လည္ဆြဲ၊ ဥပမာအားဖြင့်။ တချိန်တည်းမှာ၊ကျွန်မသိတယ်တစ်ချို့ သူစိတ်ထဲမထားပါဘူးလျှင်မိမိတို့အသိသာထင်ရှားသောအခြားသည်အခြားဘာသာမဖော်ထုတ်နှင့်အတူ။ ဒါပေမယ့်သတိပေးခဲ့သည်ခံရလျှင်ပင်သူတို့ဂရုမစိုက်၊သူတို့မိသားစုစေခြင်းငှါ၊ဒါကြောင့်ဂရုတစိုက်နင်း။ ၊ဘယ်လောက်ဖွင့်။ အခါျမတ္စြာသာ ဆက်ဆံရေးဆောင်ခဲ့သူတို့ရဲ့သိသာအခြားသူများကိုကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်သို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့၊သူတို့အမြဲတမ်းအများပမာဏကိုလွှမ်းမိုးစာငါ့အမိနစ္မွာအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်တစ်ဦးနှစ်ရက်ကြာကာလ(ဟုတ်ကဲ့၊နှစ်ခု။ အစားအစာအရေးကြီးပါသည်)။ မအအုိေက။ အဖိလစ်ပိုင်မိသားစုချည်နှောင်ဖို့ကိုယ်ပိုင်အနည်းဆုံးတစ်ခု(သောကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောသူမြားရှိကွဲပြားခြားနားသောသီချင်း၊ဝိညာဉ်တော်သည်)။ ဒါကြောင့်၊သင်ရနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ပါတီနှင့်လူတိုင်းသည်ယစ်မူးနှင့်သီချင်းဆိုခြင်း၊စိတ်မကောင်းပါဘူးသင်မူကား၊မရ။ ကျနော်တို့အင်အားသင်နာသီချင်းဆိုမည်။ သူယောက်ျားတွေပြသကျိုးစီးပွားအတွက်ချိန်းတွေ့ငါ့ကိုမြင်တစ်ဦးစိန်ခေါ်မှုအခါသူတို့အထဲကရှာတွေ့ကျွန်မဟာကျွန်မကိုယ်ကျွန်မကယ်တင်ဖို့အတွက်ထောင်။ သူတို့အတွေးသူတို့တဖြည်းဖြည်းဖိအားအကြှနျုပျကိုနှင့်အချိုးချ၊ဒါပေမယ့် ထမြောက်ကြသည်ယုံကြည်ဖို့လိင်အဘို့ တစ်စုံတစ်ယောက်သင်ရည်ရွယ်ထား၏ကျန်သုံးဖြုန်းရန်သင်၏အသက်တာနှင့်အတူ။ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကက်သလစ်ဘာသာတရားအစိတ်အပိုင်းအတွက်၊လွန်း။)သင်တန်း၏၊အချို့ လေ့ဖြစ်ဖို့လျော့နည်းလိင်ရှေးရိုးစွဲအခြားသူများထက်ပို၊ဒါပေမယ့်ပင်ထို့နောက်၊သူတို့ဖြစ်နိုင်နှစ်သက်မပြောဆိုရန်ပွင့်လင်းအကြောင်းသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ။
အဲဒီလျှို့ဝှက်ချက်အကြောင်း မိန်းကလေးများအတွက်ကျွမ်းကျင်ချက်ပြုတ်နှင့်အိမ်ထောင်။ ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးနှင့်တိတ်ဆိတ်မိသားစုဘဝ၊ဆံု အမျိုးသမီးနှင့်သူတို့ကိုကိုက်ညီလိမ့်မည်သင်သည်စွာ။ ဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်”အမေကြည့်ရှုရန်အလွန်ခက်ခဲနှင့်အတူဆက်ဆံရေးကိုအတစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်အကြီးမားအကွာအဝေး၊မဖော်ပြထားခြင်းအလေးအနက်သို့မဟုတ် အချစ်သောသူ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊လူအများကြီးအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဂြိုဟ်များရှာဖွေရန်စီမံခန့်ခွဲသူတို့၏နိုင်ငံခြားရေးခြစ်-ဒါကြောင့်သည်အဘယ်အရာကိုအောင်မြင်သောချိန်းတွေ့ဖို့အဓိကသော့ချက်အင်တာနက်ပေါ်မှာ။ ဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်”ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးများမှာအလွန်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အတိုင်းအမျိုးသားများအတွက်။ သို့သော်အဘယ်အရာအထူး။ နှင့်အသင်သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်ပျော်ရွှင်သောမိသားစုအသက်တာနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်”အဖေ့အများကြီးရှိသည်ထောင်ရေးအကောက်ခွန်။ အချို့သောနေဆဲထိုသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပင်တိုင်နေ့စဉ်လည်းရှိပါတယ်၊အချို့သောပွေ့ခြားနိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်။ ဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်”ထောင်ရေးသည်မြင့်မြတ်သောပည္ေထာင္စုနှစ်ဦးတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်၊နှင့်အသက်-ပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်ဘဝအသက်တာ၏များစွာသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး။ အဖြစ်မြောက်မြားစွာကလူရှာသူတို့၏အသက်တာမိတ်ဖက်၊အများအပြားပို။ပိုလှည့်ဖို့အွန်လိုင်းအာကာသရှာဖွေဖို့လှပသောမိန်းကလေး။ များစွာသောနေစဉ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသံသယ၏အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုမှ အတွက်အိမ်ထောင်ဖက်များမိမိတို့ကြိုက်၊အများအပြားတွေ့ကြပြီအချစ်ဒီအအလတ်စားမှတဆင့်နှင့်တွင်အောင်မြင်မှု၊စိတ်ခံစားမှုကျေပွန် လက်ထပ်ထိမ်းမြား။ ဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်”အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့အလူသိများလျက်ရှိသူတို့ရဲ့အလှအပနှင့်ကျက်သရေအားလုံးကမ္ဘာအနှံ့။ တိုင်းပြည်ကအပြည့်အဝနှင့်အတူတင်ဆောင်တော်တော်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်အတူအဘယ်သူသင်အလွယ်တကူမေတ္တာ၌လဲကျဖို့ဆန္ဒနှင့်အမှဦးဆောင်သင့်အသက်တာ၏ကျန်နှင့်အတူ။ အများအပြားရှိပါတယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့သူတစ်ဦးကဲ့သို့ပိုပြီးနှစ်သက်ချိန်းတွေ့အမျိုးသမီးမှနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ထက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဇာတိမြို့။ ဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်”လူတိုင်းအတွက်ရှာ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုမည်သူမွာခရီး၏အသက်တာ၏လက်ကိုကိုင်အတွင်းအတက်အကျမှာအသီးအသီးများနှင့်အသီးအဆင့်။ ဤသည်လူတစ်ဦးသင်စောင့်ရှောက်မက်လောက်ကတည်းကသင်ဆိတ်သငယ်အဘို့အမြော်လင့်လျက်အချိန်အကြာကြီး။ လူတစ်ဦးချင်းစီလိုအပ်တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဘယ်သူ၏အသက်တာနှင့်အတူလမ်းလျှောက်အတူတကွအားလုံးမင်္ဂလာ၊ဝမ်းနည်းနေသည့်အသက်တာ၌။ ဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်”များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှကျဆုံးပြီးနောက် မှုကြောင့်အမျိုးသမီးသူတို့၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအတွက်စိတ်ဝင်စား ချိန်းတွေ့သင်သည်တတ်နိုင်အစဉ်အမြဲအဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးယုံကြည်စိတ်ချဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ သင် ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် အပေါ်၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအောင်မြင်ကြရလိမ့်မည်တွင်ဖိလစ်ပိုင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဘယ်မှာ တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးရှာဖွေနေနေတယ်ဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်များအကြားနိုင်ငံခြားလူတို့။ လူအချို့သည်အမှန်တကယ်ကြည်မြေတပြင်လုံးပုံပြင်နှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များလို့သူတို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှသူတို့ရဲ့အထူးတစ်စုံတစ်ဦးကအပေါ်။ သို့သော်၊သင်ရှာလိုလျှင်အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်၊သင်သည်သင်၏ချိန်းတွေ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သင့်ချောမွေ့သွားအကူအညီဖြင့်များဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်”သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးယောက်ျားနဲ့လို့မရလက်ထပ်ဖို့တစ်ကြင္း၊ထို့နောက်သင်ခန့်ထားပြီလက်ျာဘက်ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ကျော်အားလုံး၏ရာခိုင်နှုန်းဖိလစ်ပိုင်လူဦးေခရစ်ယာန်။ မအောင်မည်သည့်ပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်ပါကတစ်သင်၌စိတ်ဝင်စားကြသည်။ အလွန်မြတ်သော၊ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌ဘုရားသခင်နှင့်အဆင္ေပွင့်လင်းနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး။ ဤယုံကြည်ခြင်းကို အမျိုးသမီးဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊မေတ္တာနှင့်အလွန်ညောဖြစ်ကသူတို့ရဲ့အခြားရှက်။ ကွာရှင်းမတရားဝင်အတွက်ဒီနိုင်ငံအကြောင်းအဘယ်ကြောင့် အမျိုးသမီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယူလက်ထပ်ဖို့အလွန်အလေးအနက်။ ဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်”ယနေ့အပေါ်ဝဘ်တစျရှာတွေ့နိုင်ပါသည်များကြီး ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသွယ်နှင့်အတူ အမျိုးသမီး။ သုံးလိုင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၊သင်အလွယ်တကူရှာတွေ့များအပြား ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အတူတကွဤအတူ၊ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသောပြဿနာဆိုက်ဖို့ရွေးချယ်၊သူတို့တကယ်မြောက်မြားစွာ။ အပြင်ဆောင်းပါးသင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အချို့သောအကြံပေးချက်များကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့ ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်ရမယ်ထင်၏လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်။ မပေးဘယ်တော့မှမသင်၏လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်သို့မဟုတ်မည်သည့်သတင်းအချက်အပေါ်တွင်သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခါသင်အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးဆို ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်အစဉ်မပြတ်သေချာအောင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်စောင့်ရှောက်အတွက်သီးသန့်။ တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်တဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်သည်သင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်၊ထိုလမ်းပေးဆောင်ရန်အဘို့အဝန်ဆောင်မှု၏အများဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အက။ ဖတ်ရှုခြင်းကိုဆက်လက်”
ကျွန်မဒီမှာရှိနေတာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ယောက်ျားတွေမှသုံးဆယ်မှခြောက်ဆယ်နှစ်အရွယ်အဘို့အချိန်းတွေ့၊ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊လေးနက်တဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ကွန်ယက်။ မင်္ဂလာပါ။ သင်မည်သို့ယောက်ျားတွေ။ ကြၽန္ေ သုံးဆယ်နှစ်အရွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုကနေမြောက်ပိုင်း ဒါပေမယ့်အသက်ရှင်သောအတွက် တြက္ပါ။ ငါတော်တော်မဟုတ်၊ငါရုပ်ဆိုးမ၊ငါဖြစ်၏ရုံဟာရိုးရိုးမိန်းမတစ်ဦးရိုးရှင်းသောအသက်တာနှင့်ငါရိုးရှင်းသော။ ရချင်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုသိမှပို။ ကိုယ့်မေးဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြည့်ရှု။ငါ့ရို။ မင်္ဂလာရှိသော၊မေတ္တာပါယောက်ျားသည်၊စိတ်ရင်းမှန်၊နှိမ့်ချပွင့်လင်းလိုလားတဲ့၊ဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊ယုံကြည်ရတဲ့နှင့်အသူသည်ငါ့ကိုလက်ခံ၏။ လည်းဘယ်လိုသိမှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အမျိုးသမီးငယ္ဆံုးလးအလွန်အရေးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့်ယုံကြည်မှု။
အများကြီးအဖြေအပြည့်အဝစိတ်ပိုင်းပျက်နှင့်မောတစ်ဦးချင်းစီ၊သူအများအပြားအစပျိုးအားဖြင့်မေးခွန်းကိုဖို့ကြိုးစားခုခံကာကွယ်သူတို့၏အနေအထားအဖြစ်အရွယ်ရှိယောက်ျားတွေသို့လူငယ် အမျိုးသမီးကိုစည်းရုံးမိမိတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ဤလူငယ်ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးအဘယ်သူသည်လက်ထပ်ဟောင်းအဖြူယောက်ျားတွေလုပ်နေတယ်အသက်သက်သာပိုကောင်းတဲ့အသက်အဘို့နှင့်ငွေကို၊သူတို့ကအသိအဟောင်းကိုအဖြူလေးမည်မဟုတ်များအတွက်နေထိုင်ကြောင်းရှည်တဲ့ ပိုကောင်းတဲ့အသက်တာနေစဉ်သူသည်အသက်ရှင်လျက်နှင့်လည်းများသောအားဖြင့်ဦးကသူ့ပိုက်ဆံပြီးနောက်သူသေဆုံးသည်။ သင်နားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအသက်တာအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလူတွေကအများကြီးဘို့အအမှန်တကယ်ကောင်း၊လက်ထပ်သည့်အရွယ်လူဖြူကောင်လေးနှင့်ဟန်အတူသူ့ကိုအဘို့အများကြီးပိုကောင်းတစ်ခုခုတယောအရေအတွက်ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးစဉ်းစားပြီးအနည်းငယ်ကြွတင်ပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသတို့သမီးနှင့်ချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများအဖို့သူတို့ကိုရှာတွေ့။ မည်သူမဆိုဖို့ကြိုးစားနေ သောမိမိတို့တစ်ဦးနှစ်ဆယ်နှစ်အရွယ်လူငယ်လျောက်ပတ်သောရှာဖိလစ်ပိုင်မိန်းကလေးကအမှန်တကယ်လိင်နှင့်အ ချို့သို့ခုနစ်ဆယ်နှစ်အရွယ်အဖြူသည်အနက်အတွက်ချွတ်ကခ်င္ႏ။ တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်သင်နီးပါးမမြင်ရလူငယ်အမျိုးသမီးမှအမှန်တကယ်ကောင်းအာရှနိုင်ငံများအစဉ်အမြဲဤအမှုကိုဘယ်တော့မှပစ်မိမိတို့အပေါ်သို့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊ရိုးရှင်းစွာအသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါဘူးအတွက်အခြေအနေအဖြစ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ။ သင်မမြင်နိုင်ပါဘူး၊လူငယ်ဂျပန်အမျိုးသမီးနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ခုနစ်ဆယ်နှစ်အရွယ်အဖြူယောက်ျားတွေရယ်ရတယ်။ အဟောင်းကိုအမျိုးသားဒီသင်တန်းရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားအတွက်မိမိ အဖိလစ်ပိုင်လူငယ်မိန်းကလေးကအမှန်တကယ်သူ့ကိုချစ်တော်မူ၏။ ဒါဟာအလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်နှင့်အပူတပြင်း၊ထိုသူတို့၏အနည်းငယ်အတွက်အဖြေများကိုဒီမှာ။ အဆက်မှီကြည့်ထူးဆန်းလည်းမရှက်လူတိုင်းအတွက်နှင့်အများအတွက်မကောင်းတဲ့ခံစားရသောဖိလစ်မိန်းကလေးများ။ ဒါပေမဲ့သူတို့အကောင်းအတွက်အစဉ်၊အထိအရွယ်ယောက်ျားနောက်ဆုံးကွယ်လွန်။ အချို့လူငယ်အမျိုးသမီးလည်းလိင်ဆက်ဆံဘက်နှင့်အတူလူငယ်ကောင်လေးအဖြစ်သူတို့ကလူငယ်အမျိုးသမီးနှင့်လိုအပ်လည်း။ အပြားရှိစစ်မှန်သောပန္ကာသား၊မရှိသလောက်အရွယ်ယောက်ျားထွက်ရှာတွေ့။
နေရာအရပ်ကိုအကြှနျုပျအဘို့မျှဝေဖို့ငါ၏အကြံအစည်အပေါ်အရပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊အမှုအရာငါဝယ်များနှင့်အခြားသူဘာပဲကိုဝင်လာသည်ငါ၏စိတ်ကိုအတွက်။ ကျေးဇူးသင်တို့အဘို့အယူအချိန်အနည်းငယ်အကြှနျုပျကိုအတူမျှဝေ။ ထားခဲ့ဖို့အခမဲ့ခံစားရအပြုသဘောဆောင်တဲ့သို့မဟုတ်အထောက်အကူဖြစ်စေ။ တစုံတခုသောစကား၊နှောက်ယှက်၊သို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်တစ်စုံတစ်ဦးအဘို့အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်များကိုဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံခရီး၊ယော ဒါကပဲကျွန်တော့်အမြင်အပေါ်အချို့သောကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြည့်ဆည်းဖို့ကောင်း ။ ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့သောမှတ်ချက်များအတွက်ရှိပါကပိုမိုအကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်ဘယ်မှာသင်တွေ့ဆုံသင့်ရဲ့အထူးတစ်စုံတစ်ဦးက။ ကိုကြည့်ရှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အလွ မိန်းကလေးများနှင့်ကနေဒါအတွက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ။ (ဖိလစ်ပိုင်ပွဲတော်)
တစ်နည်းနည်းနဲ့၊အတက်အဆုံးသတ်နှင့်အတူသုံးယောက်အဆင်းလှသော မိန်းကလေးများအတွက် ။ အပေါ်တစ်ဦးနှုန်းရှင်များအတွက် ပွဲတော်ချီတက်ပွဲ။ အဲဒီတုန်းကဒါဟာအေးမြ။ ငါတက်အဆုံးသတ်ကောက်ရတဲ့ကဆက်သွယ်မေးမြန်းအနှုန်းရှင်ချီတက်ပွဲဒါရိုက်တာကားမောင်းနေစဉ်အ ။ သူမေးချင်တဲ့စာသားပူးပေါင်းအပွင့်ညွင္းချီတက်ပွဲ။ ငါသွားခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်၊ငါပြု၏။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ကြလိမ့်မည်တကနေဒါကကောင်လေး၊ မိန်းကလေးငယ်များ၊အုပ်စုတစု၏ နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးစည်း၏အဆင်းလှသောလူဦးေ။
အခမဲ့ ချိန်းတွေ့ဆိုက်။ တွေ့ဆုံဒေသခံတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အွန်လိုင်းဖိလစ်ပိုင်
အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကြောင့်ရှိပါတယ်ကတည်းကသင်ချိန်းတွေ့အတွက်ဖိလစ်ပိုင်မြင်စွာ? ရှည်လွန်း။ ထိုအခါ၊ခါလည်းဒါဟာအချိန်ကိုပြောင်းလဲဖို့တစ်ခုခု။ ဘယ်လိုအကြောင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကြိုးစားနေ။ ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တဲ့အလွန်ကြီးရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်လူများ၏အရေအတွေ့သောသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ငါတို့နှင့်အတူကူညီမယ်လို့ပြောပြီး။ မစိုးရိမ်ကြလျှင်သင်ဆဲမည်သည့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ သင်တဦးတည်းသာမဟုတ်ကြသူအချို့နှင့်အတူဒုက္ခ။ တကယ်တော့၊အဲဒီအပြားတစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများဖိလစ်ပိုင်အတွက်။ အဓိကပြဿနာမဟုတ်ကြောင်းအကြောင်းရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူတစ်လျောက်ပတ်။ အသုံးအများဆုံးအတားအဆီး အားလုံးသည်တစ်ဦးတစ်ယောက်မျက်နှာသည်၎င်းတို့၏ရက်စွဲများတွေဟာပျင်းစရာကောင်းပြီးတက်စေနိုင်ဘာမှအကျိုးစီးပွား။ လျှင်မခံမရပ်နိုင်သောအပျင်းသွား၏ရက်စွဲများအပေါ်အဆုံးသတ်နှင့်အတူလုံးဝဘာမျှမရှိ၊ကျနော်တို့ပူဇော်။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်သင့်ရဲ့အခွအေနေ။ သင်သည်သင်၏ရာပေါင်းများစွာ၏အခြားသူတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရအတူတူပါပဲ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တြအရပ်၌ပျော်ရွှင်မှု။ ဒါကြောင့်၊သင်။ သင့်ယုံကြည်ပြီးကဲ့သို့အခြားလူများခဲ့။ ၏ပုဂ္ဂလိကဘဝသင်တို့လက်၌ရှိ၏။ ကျနော်တို့သာအမှန်ပါ။ မနေပါစေလူဘာပြောစေခြင်းငှါ၊ကြောင်းအခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ဒါပေမယ့်သင်ကကြိုးစားသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၊သင်တို့မကြိုးစားပါဘူး၊သင်သိဘယ်တော့မှ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံပြပါလိမ့်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနည်းလမ်းသင်သည်အကိုက်ညီ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သေချာမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချတယ်။ ကြသည်မဟုတ်ကြောင့်ပထမဦးဆုံးတဦးနှင့်အတူ။ ကျနော်တို့ကူညီပေးခဲ့သောလူသားပယ်အားလုံးမျှော်လင့်ချက်မှရှာဖွေမည်သူမဆိုမှာအားလုံး။ အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အရွေးစရာတခုမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့အသက်တာတစ်ချိန်ကနှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့၊ထို့နောက်ဖြစ်ပါဘူးလို့အဲဒီအမျိုးသမီးမ ဘာမှမလုပ်ပေးချင်ပေမယ့်အဘို့အမြော်လင့်လျက်အံ့ဖွယ်အ။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအပေါ်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်၊သင်မူကား၊ရှိသည်မှတ်ပုံတင်ရန်ရှိပါတယ်။ ကြောင့်ကြာမည်မဟုတ်၊တကယ်တော့။ သင်ရုံများကိုအချို့သောအခြေခံအချက်အလက်များ(နာမည်၊နေ့စွဲ၊နေရာအနေစသည်တို့ကို။)နှင့်အရေးအချို့စကားသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်ပတ်သက်။ လူအများစုဟာအကြောင်းရေးသားသူတို့ဘာလုပ်နေအတွက်မိမိတို့အအခမဲ့အချိန်သို့မဟုတ်ကြောင်းသူတို့၏အမြင်တွင်အသက်အဘို့၊ဥပမာ၊အနာဂတ်ပန်းတိုင်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကြံပေးရေးသားဖို့ကိုအလားတူအလမ်းအကြောင်းဒါကြောင့်လွယ်ကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တူလူများအတွက်အလားတူအကျိုးစီးပွားရှာဖို့သင်။ များစွာသောဖိလစ်ပိုင်တစ်ဦးတစ်ယောက်အိပ်မက်၏အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့၊ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသာအနည်းငယ်အကျင့်ကိုကျင့်သောအရာတစ်ခုခုရ။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုလာ။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟာအကောင်းဆုံးအများမှာ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကပြောဂုဏ်ယူပါတယ်လူများစွာတွေ့ဆုံသူတို့ရဲ့မေတ္တာကိုဒီမှာနှင့်အသက်ရှင်ခုအတွက်အတူတကွ။။။။။ လူတိုင်းလိုလား။ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နိုင်တယ်အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီကိုသူတို့မတှေ့နိုငျသောသူမိတ်ဖက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်။ ဒါဟာခက်ခဲနိုင်ပါတယ်၊နှင့်သင်စွာသိ အဘယ်ကြောင့်။ ဒါပေမယ့်အကယ်၍ကျွန်တော်ကူညီချင်နှင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိကြောင်း၊ထို့နောက်အဘယ်ကြောင့်စောင့်ဆိုင်းများအတွက်အံ့ဖွယ်အ။ တဦးသွားရောက်ကြည့်ရှုဖိလစ်ပိုင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးပရိုဖိုင်ရှိပါတယ်။ မကြာခေါင်း၏အရည်အတစ်ခုတည်းကလူဖြစ်လာလိမ့်မည်သင်တို့အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့။ ထို့ကြောင့်၊သငျသညျနိုင်လိမ့်မည်စစ္ေတြပရိုဖိုင်းအတွက်ရှာဖွေရေးအတွက်တိရစာန်များနှင့်ရှိမရှိကြည့်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးရှိပါ။။ အပြင်၊သင်မြင်သည့်အတိုင်းအဘယ်သို့လူတစ်ဦးအတွက်စိတ်ဝင်စား၊သငျသညျရှာတွေ့နိုင်ပါသည်တစ်ခုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းရေခဲကိုချိုးဖျက်ဖို့နဲ့စကားစတင်၊ဦးတည်စေခြင်းငှါအရာတစ်ခုခုမှကြီးမားအနာဂတ်အတွက်။ သင်သည်မပြုလျှင်မည်သည့်သံသယတော့ဘူး၊ရှေ့ဆက်သွားသို့ဦးတည်သင်သည်သင်၏အိပ်မက်များ၏ပျော်ရွှင်သောမိသားစုဘဝ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ကူညီလိမ့်မည်အကောင်းဆုံးနိုင်ပါတယ်။ သင်မှတ်မိသင့်ပထမဦးဆုံးနမ်း? ဖြစ်နိုင်။ အဆိုအရျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊လူအများစုကအသေးစိတ်သတိရ၏သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးနမ်းမွတ္မိေ-နှင့်အတူကရှင်းလင်းပြတ်သား၊တကယ်တော့။ ပိုပြီးဖွင့်အဘယျသို့အကြောင်းမကောင်းတဲ့အနမ်းဖျက်ဆီးနိုင်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းချိန်းတွေ့သင့်အနမ်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရှည်လျား-အခေါ်အဝေါ်။ ၊။ ဒါဟာယူတာပဲဖမ်းမိသွားပေါ်ထွက်ချစ်သူများရဲ့နေ့၊တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှိနိုင်ပါသည်။ တူ ပင္လံုလွေပေါ်တွင်ပိတ်မိနေတဲ့ရေခဲစိုင်မျောများ၊မည်သို့မည်စဉ်မှပြန်လာ၏လွေထုပ်နှင့်အတွေ့အပူဝံပုလွေ-ထောင်ဖက်ကိုချစ်ဖို့။ ကောင်းပြီ၊ဒီမ၊သိသိသာသာဖြစ်နိုင်။ ဖြစ်ခြင်းသည်ဤ။ သူယောက်ျားနှင့်အတူအဘယ်သူသင်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြကုန်၏ကျန်ရက်ပေါင်း? သူသည်အမျိုးသမီးနှင့်အတူအဘယ်သူသင်ဆောက်လုပ်ဖို့ချင်တယ်အသက်